Cittasukha Myanmar Monastery (Korea) Cittasukha Myanmar Monastery (Korea): 2011
စိတ္တသုခ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တတိယ အကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အလှူတော်ပွဲ အတွက် ဖိတ်ကြား နှိုးဆော်ခြင်း
ကျနော်တို့ စိတ္တသုခ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ထောင်လာခဲ့တာဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကိုရီးယား နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ (၃) နှစ်တိတိ ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒေဂူးမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ အလှူတော်ပွဲ အမြောက်အများကို ကျင်းပခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက နေရာ တော်တော်များများ မှာလည်း ထာဝရ အလှူအမျိုးမျိုးကို လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ် ၊ ဘာသာရေးနဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ အလှူတော်များအပြင် စာကြည့်တိုက် ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း စတဲ့ လူမှုကူညီရေးနဲ့ စပ်ဆိုင်တဲ့ အလှူတော်များလည်း ပါဝင်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ နှစ်ပတ်လည် အလှူတော်ပွဲ အခမ်းအနားများကို စည်စည်ကားကား ကျင်းပခဲ့သလို ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒကို ပင့်ဖိတ်ပြီး အထူးတရားပွဲကို ကျင်းပနာယူ နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ ယခုနှစ်မှာလည်း ယခင်နှစ်များကလိုပဲ နှစ်ပတ်လည် အလှူတော်ပွဲကို ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပမှာဖြစ်သလို ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက နေရာတစ်ခုခုမှာ လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယခုနှစ် ကိုရီးယား နှစ်သစ်ကူးနေ့ (၂၂.၁.၂၀၁၂) တနင်္ဂနွေနေ့မှာ နှစ်ပတ်လည် အလှူတော်ပွဲကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ စိတ္တသုခကျောင်း ဆရာတော်ဟာလည်း အလှူတော်ပွဲ မတိုင်မီ (၁၉.၁.၂၀၁၂) ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လှူဒါန်းဖို့ အစီအစဉ်ဟာလည်း ဆရာတော် ကြွရောက်လာတဲ့အခါမှာ အတူဆောင်ယူလာမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဆရာတော်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းဖြင့် ပြုလုပ်နေတဲ့ သာသနာပြု လုပ်ငန်းများဟာ မပြီးပြတ်သေးပဲ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် ရှိနေတဲ့အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ရက်အနည်းငယ်သာ သီတင်းသုံးပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ကြွရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုရီးယားကို ဆရာတော် ပြန်လည် ကြွရောက်လာတဲ့ အခိုက်မှာ နှစ်ပတ်လည် အလှူပွဲတော် ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့အနေဖြင့် ပွဲတော်ကို စည်စည်ကားကား ကျင်းပလိုတာဖြစ်ပါတယ် ၊ သို့အတွက်ကြောင့် ဒေဂူးဝန်းကျင်မှ ရွှေသူငယ်ချင်းများ အားလုံး ၊ ကိုရီးယားရောက် ရွှေမြန်မာများ အားလုံးကို အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့မှ လေးလေးစားစား ကြိုတင် အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ် ၊ မသိကြသေးတဲ့ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း တစ်ဆင့် အသိပေး သတင်းပါးလိုက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။
အဟာရဒါန အဖြစ် အကျွေးအမွေးဖြင့် တာဝန်ယူ လှူဒါန်းလိုသူများ ကျနော်တို့ အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့မှ တစ်ဦးဦးထံ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ၊ လှူဒါန်းလိုပါသော်လည်း အချက်အပြုတ် နဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှု အပိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်မည့်သူမရှိပါက ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့် ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့မှ ဖြစ်စေ ယုံရှင်း ညီအစ်ကို များမှဖြစ်စေ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်အောင် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးပါမယ် ။ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ သဒ္ဓါတရားအရ လုပ်ဆောင်လိုတဲ့ အခြား မည်သည့် ကုသိုလ်ရေး အစီအစဉ်ကို မဆို ကျနော်တို့က ကူညီဖြည့်ဆီးပေးဖို့ အသင့် ရှိပါကြောင်း ထပ်လောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Posted by Unknown at 4:09 AM0comments
မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (ကိုရီးယား) မြန်မာပိုင်ကျောင်းနေရာ ဝယ်ယူလှူဒါန်းနိုင်ရေး နှိုးဆော်လွှာ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ပြည်ထောင်စုဖွား ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့... ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးသည် မြန်မာအလုပ်သမား အများစုနှင့် ပြည်ထောင်စုဖွား ရွှေမြန်မာများ၏ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် အားထားမှီခိုရာ ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းနေရာကို (ကိုယ်ပိုင်)ဝယ်ယူလှူဒါန်းပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယား အစိုးရထံမှ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (미얀마불교전법사원)ဟူသော အမည်ဖြင့် တရားဝင်ခွင်ပြုချက် မှတ်ပုံတင်လည်း ကျပြီးဖြစ်၍ လှူဒါန်းနိုင်သော ဘဏ်အကောင့်များကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာပိုင်ကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးတွင် တစ်တတ်တစ်အား ပါဝင်လှူဒါန်း လိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဦးဆောင်ဆရာတော်များနှင့် နီးစပ်ရာ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်များထံ ဆက်သွယ်ကာ သင့်လျော်သည့် ဘဏ်အကောင့်များသို့ ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
၁။ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (ဘူဖြောင်း) ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလ (ဝေါဆရာတော်) (ဖုန်း = ၀၁၀-၆၅၅၇-၀၂၂၂) လက်ထောက် ဆရာတော် အရှင်ဥတ္တရ (ဖုန်း = ၀၁၀-၂၃၂၇-၂၄၅၇) ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ (ဖုန်း = ၀၃၂-၅၁၁-၂၈၄၁)
၂။ ဆရာတော် အရှင်ပဏ္ဍိစ္စ (ဘူဆန်ပြည်တော်ဦးဆရာတော်) နှင့် ဆရာတော်၏ တပည့်ကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင်များ (ဖုန်း = ၀၁၀-၄၀၄၅-၇၀၀၂)
၃။ ဆရာတော် အရှင်သုဝဏ္ဏ (ဆိုးလ်ဆရာတော်) (ဖုန်း = ၀၁၀-၅၁၈၄-၃၅၇၈)
၄။ ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပ ဒါယီဆရာတော်) နှင့် ဆရာတော်၏ တပည့်ကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင်များ ဒယ်ဂူးစိတ္တသုခ မြန်မာကျောင်း (ဖုန်း = ၀၁၀-၃၇၈၇-၉၆၉၃)
1) KB (국민은행) 839801-01-472034 (미얀마불교전법사원)
2) IBK (기업은행) 370-044956-01-011 (미얀마불교전법사원)
3) NH (농협은행) 351-0396-3090-93 (미얀마불교전법사원)
မှတ်ချက်။ ကျောင်းတော်ကြီး ဝယ်ယူရာတွင် အားလုံးအတွက် သွားလာရေး လွယ်ကူသည့် နေရာကို ရွေးချယ်ပြီး ဝယ်ယူရန် ရည်ရွယ်ထားပါသဖြင့် တစ်နှစ်အတွင်း ကျောင်းတော်ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ခန့်မှန်း ကိုရီးယားဝမ် သိန်းခြောက်ထောင်ခန့် စုဆောင်းရရှိရန် ရန်မှန်းထားပါ၍ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ စေတနာသဒ္ဓါ ထက်သန်စွာဖြင့် တတ်စွမ်းသမျှ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အလှူရှင်များအားလုံးကို ကမ္ဗည်းမှတ်တမ်းတင်၍ ကျောင်းတော်ကြီး၌ သမိုင်းမှတ်တိုင် ထာဝရစိုက်ထူပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း....။
ဟန်းဂုရွာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည် ။
စုစည်းထားမှု = ၇။ သာရေး/ နာရေး / လူမှုရေး
ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) မြေနေရာဝယ်ယူရေးအလှူတော်ငွေ အတွက် ဓမ္မဒူတ ဘဏ်စာရင်း
ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အနေဖြင့် ပဓါနနာယက ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ သြဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးမှုကိုခံယူလျက် ၊ ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒက နှင့် အရှင်ကိတ္တိသာရ တို့၏ အနီးကပ် ကြီးကြပ်မှုတို့ဖြင့် ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဓမ္မဒူတ မြေနေရာဝယ်ယူရေး နှင့် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ် လှူဒါန်းရေး အစီအစဉ် အတွက် အလှူတော်ငွေများ ပေးပို့လှူဒါန်းလိုကြကြောင်း အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ မေးမြန်းကြသည့် ပါရမီရှင်များအား ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) က ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း မေတ္တာစကား ပါးအပ်ပါသည် ။
အဆိုပါ မေးမြန်းထားကြသည့် မြန်မာမိတ်ဆွေ ပါရမီရှင် တို့အနေဖြင့် မိတ်ဆွေတို့၏ အလှူတော်ငွေများကို အောက်ပါဘဏ်စာရင်းအတိုင်း ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည် -
ဘဏ်အမည် - 신한은행 (SHINHAN BANK)
ဘဏ်စာရင်းအမည်- 담마두따문화협회(DHAMMADUTA CULTURE ASSOCIATION)
ဟန်းဂုရွာမှ ကူးယူးဖေါ်ပြပါသည် ။
Posted by Unknown at 3:39 AM0comments
ဆရာတော် မြန်မာပြည်တွင် ရှိမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အိမ်တော်ရာတိုက်၊ သီရိဇေယျုံကျောင်းနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒယ်ဂူးမြို့၊ စိတ္တသု မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့၏ ပဓာန နာယကဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပ ဒါယီ)သည် (၃၁-၁၀-၂၀၁၁)ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာပြည်တွင် (၂)လကျော်ခန့် ပြန်လည်ကြွရောက်ကာ ပြည်တွင်းသာသနာပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွတ်တော်မူမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော် မရှိခိုက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအဝဝကို ကျောင်းအကျိုးဆောင်များက တာဝန်ယူ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြမည် ဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွတ်လိုသူ မြန်မာဒကာဒကာမများ အနေဖြင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကာ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာစွာ အတူတကွ ပူပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွတ်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော် မြန်မာပြည်တွင်ရှိခိုက် လာရောက် ဖူးမျှော်လိုသူများ၊ ဘာသာရေး အသိပညာ ဖလှယ်လိုသူများ၊ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာကို မေးမြန်းလျှောက်ထား လိုသူများ အနေဖြင့်လည်း အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ကြိုတင်ဆက်သွယ်ကာ ဖူးမျှော်ကြည်ညို တွေ့ဆုံမေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးစကား ပါးအပ်ပါသည်။
မနာပ ဒါယီဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ
မြို့မကျောင်းလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ကျောင်းဖုန်း = ၃၈၃-၇၉၆
လက်ကိုင်ဖုန်း = ၀၉၄၃-၁၆၂-၃၁၂
Posted by cittasukha at 8:46 PM0comments
စုစည်းထားမှု = ၁။ ဆရာတော်, ၂။ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာများ
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာ ဘုံကထိန် အလှူတော် အခမ်းအနား မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ
second Kahtina - make slideshow
စိတ္တသုခကျောင်း ဆရာတော်နှင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင်များ၊ စိတ္တသုခ ဝေယျဝစ္စအဖွဲ့သားများ၊ စိတ္တသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်း အကျိုးဆောင်များ၏ စုပေါင်းတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ အနေဖြင့် ကြွရောက်ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် = ၃၀-၁၀-၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် = ညနေ (၄)နာရီ
နေရာ = စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
Posted by cittasukha at 5:50 PM0comments
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာ ဘုံကထိန် အလှူတော် အခမ်းအနား အရပ်ရပ် အလှူရှင်များ စာရင်း
(၂၃-၁၀-၂၀၁၁) တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် စိတ္တသုခ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ဆင်ယင် ကျင်းပအပ်သော ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာ ဘုံကထိန် အလှူတော် အခမ်းအနား အရပ်ရပ် အလှူရှင်များ စာရင်း
စဉ် အလှူရှင်နှင့် အလှူပစ္စည်း စာရင်း
၁ ) ခမည်းတော် ဦးတင်မောင် မယ်တော် ဒေါ်ခင်ထွေး အမှူးထား၍ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တမှ ကထိန်သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၂ ) ကိုလင်းထိန်ဝင်း + မမေထက်ထက်လွင် မိသားစု နှင့် ကိုလင်းလင်းစိုး ၊ ကိုချန်ဒူးဝမ် တို့က သင်္ကန်း (၁) စုံ ၊ ခြုံထည် (၇) ထည်
၃ ) ကိုရွှန်းဝင့်နွယ် + မမို့မို့အောင် သင်္ကန်း (၁) စုံ
၄ ) ကိုသန့်ဇင်အောင် သင်္ကန်း (၁) စုံ
၅ ) ကိုကျော်လင်းထိုက် မှ ကထိန် သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၆ ) ကိုသိန်းငွေ မှ ကထိန် သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၇ ) ကိုသန်းဇော် မှ ကထိန် သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၈ ) ကိုကျော်စိုးဝင်း မှ ကထိန် သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၉ ) ကိုဝဏ္ဏစိုး မှ ကထိန် သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၁၀ ) ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ထွေးစိန်အား ရည်စူး၍ ဦးမောင်ကျော် မိသားစု ၃၀၀၀၀
၁၁ ) ကွယ်လွန်သူ ဦးဇော်မျိုးဝင်း + ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်အားရည်စူး၍ သားပြည့်ဟန်မျိုးဝင်း သမီးချောစုမျိုးဝင်း တို့က ၃၀၀၀၀
၁၂ )ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး ဒေါ်ထွေးသိန်းအားရည်စူး၍ သားကိုမင်းနိုင် ဇနီးမအေးယုနွယ် ၆၀၀၀၀
၁၃ ) ကိုမောင်မောင် ကထိန် သင်္ကန်း အတွက် ၃၀၀၀၀
၁၄ ) ကိုဘိုလင်း ၅၀၀၀၀
၁၅ ) ကိုဝေဠုဇော် (လူပျိုကြီး) ၅၀၀၀၀
၁၆ ) ကိုစလေ ၅၀၀၀၀
၁၇ ) ကိုထွန်းထွန်းလင်း ၃၀၀၀၀
၁၈ ) ကိုဝင်းလှိုင် + မယဉ်သူ ၅၀၀၀၀
၁၉ ) ကိုမောင်မောင်နှင့် မောင်နှမတစ်စု ၃၀၀၀၀
၂၀ ) ကိုသန်းဇော် ၃၀၀၀၀
၂၁ ) ကိုစိုးပိုင်မှူး ၃၀၀၀၀
၂၂ ) ကိုကျော်လင်း ၃၀၀၀၀
၂၃ ) ကိုနေလင်းဦး (ရွှေကမ္ဘာ) ၅၀၀၀၀
၂၄ ) ကိုစိန်ချွန် ၅၀၀၀၀
၂၅ ) ကိုစိုင်းဆိုင်လိုင်းဝမ်း + ကိုသန့်ဇင်အောင် ၃၀၀၀၀
၂၆ ) ကိုမျိုးညွန့်အောင် ၃၀၀၀၀
၂၇ ) ကိုဇော်ထူးအောင် ( အသေးလေး) ၁၀၀၀၀၀
၂၈ ) ကိုဘိုဇာစိုး ၃၀၀၀၀
၂၉ ) ကိုမျိုးအောင် ၃၀၀၀၀
၃၀ ) ကိုထွန်းထွန်းလတ် ၃၀၀၀၀
၃၁ ) ကိုဇော်မင်းသူ ၃၀၀၀၀
၃၂ ) ကိုစန်းမောင် ၃၀၀၀၀
၃၃ ) ကိုအောင်သူနိုင် ၃၀၀၀၀
၃၄ ) ကိုဇော်ထက်ဦး ၃၀၀၀၀
၃၅ ) ကိုန်ုင်လင်းထွန်း ၃၀၀၀
၃၆ ) ကိုမောင်မောင် ၃၀၀၀၀
၃၇ ) ကိုမျိုးဇော်ဦး (ဂင်မဲ) ၃၀၀၀၀
၃၈ ) ဂျီလယန်းစက်မှုဇုန် သြဂုတ်လ လစဉ် အလှူငွေ ၄၂၀၀၀၀
ဂျီလယန်းစက်မှုဇုန် စက်တင်ဘာလ လစဉ် အလှူငွေ ၄၁၀၀၀၀
ဂျီလယန်းစက်မှုဇုန် အောက်တိုဘာလ လစဉ် အလှူငွေ ၂၂၀၀၀၀
၃၉ ) ကိုနိုင်အောင်ကျော် ၃၀၀၀၀
၄၀ ) ကိုဝင်းစိန် (ဂင်မဲ) ၃၀၀၀၀
၄၁ ) မိခင် ဒေါ်ကျင်သိန်းအား ရည်စူး၍ ကိုကျော်ကျော်မြင့် + မလဲ့လဲ့ပြုံးမိသားစု ၃၀၀၀၀
၄၂ ) ကိုလှထွန်း ၅၀၀၀၀
၄၃ ) ကိုလှမင်းထွန်း ၃၀၀၀၀
၄၄ ) ကိုသက်ဝင်းအောင် ၁၀၀၀၀
၄၅ ) ကိုရဲလင်းမျိုး မိသားစု ၅၀၀၀၀
၄၆ ) ကိုစိုးနိုင် ၃၀၀၀၀
၄၇ ) ကိုချင်းချင်း ၊ ကိုဝင်းဝင်း ၃၀၀၀၀
၄၈ ) ကိုမြင့်ဇော်မိသားစု ၃၀၀၀၀
၄၉ ) ကိုရှမ်းလေး (ဂယောင်ဆန်) ၃၀၀၀၀
၅၀ ) ကိုကျော်စွာမင်း ၊ ကိုထက်အောင်ခိုင် ၂၀၀၀၀
၅၁ ) ကိုခင်ဇော် ၃၀၀၀၀
၅၂ ) ကိုဖြိုးေ၀၀င်း ၃၀၀၀၀
၅၃ ) ကိုဇော်ကြီး (ဆုံဆော) ၃၀၀၀၀
၅၄ ) ကိုကျော်ဇောလင်း ၃၀၀၀၀
၅၅ ) ကိုလှရွှေ + ဒေါ်လှလှဝင်း ၃၀၀၀၀
သင်္ကန်း (၁၈) စုံအတွက် ၅၄၀၀၀၀
၅၆ ) ကိုမျိုးညွှန့်သိန်း +မသဇင်ငြိမ်း - ၅၀၀၀၀
၅၇ )ကိုသက်နိုင် + မသင်းသင်းဌေး - ၁၀၀၀၀၀
၅၈ ) ကိုဝင်းနိုင်ဦး - ၅၀၀၀၀
၅၉ ) ကိုဇော်မင်း - ၅၀၀၀၀
၆၀ ) ကိုနေမျိုးအောင်စိုး + မခင်မျိုးဦး - ၅၀၀၀၀
၆၁ ) ကိုဌေးအောင် - ၅၀၀၀၀
၆၂ ) ကိုဇော်မင်းလေး - ၅၀၀၀၀
၆၃ ) ကိုဇော်ဝင်းထွန်း - ၅၀၀၀၀
၆၄ ) ကိုသော်တာမင်း + မမေသူအောင် - ၅၀၀၀၀
၆၅ ) ကိုဇော်မင်းထွန်း - ၅၀၀၀၀
၆၆ ) ကိုပြည့်ဖြိုးမောင် - ၅၀၀၀၀
၆၇ ) ကိုအောင်နိုင်ဝင်း - ၅၀၀၀၀
၆၈ ) ကိုမြကြီး - ၅၀၀၀၀
၆၉ ) ကိုအောင်ကျော်ငြိမ်း ၊ ကိုရဲမြင့်ဟိန်း - ၅၀၀၀၀
၇၀ ) ကိုစိုးမိုးထက် - ၅၀၀၀၀
၇၁ ) ကိုအောင်ကောက် + မကြည်ကြည်မော် - ၅၀၀၀၀
၇၂ ) ကိုအောင်ဇော်ဝင်း - ၅၀၀၀၀
၇၃ ) ကိုအောင်မျိုးထွန်း - ၅၀၀၀၀
၇၄ ) ကိုဇော်ဇော် - ၃၀၀၀၀
၇၅ ) ကိုဝင်းနိုင်လတ် - ၁၀၀၀၀
သင်္ကန်း (၁၀) စုံအတွက် ၃၀၀၀၀၀
၇၆ ) ကိုအောင်ကို - ၁၀၀၀၀၀
၇၇ ) ကိုဝဏ္ဏစိုး - ၁၀၀၀၀၀
၇၈ ) ကိုကျော်စွာ - ၁၀၀၀၀၀<
၇၉ ) ကိုဝင်းနိုင်လတ် - ၁၀၀၀၀၀
၈၀ ) ကိုသိဟ-၁၀၀၀၀၀
၈၁ ) ကိုစိုင်းမြတ်မင်း-၅၀၀၀၀
၈၂ ) ကိုလေးနိုင်-၅၀၀၀၀
၈၅ ) ကိုချမ်းမွန်-၅၀၀၀၀
၈၆ ) ကိုအောင်ဇေယျနှင့်ကိုမင်း ၂၅၀၀၀
၈၇ ) Mr.Supakara ၅၀၀၀၀
၈၈ ) ဦးတင်ဝင်း + ဒေါ်သန်းသန်း ၃၀၀၀၀
၈၉ ) ကိုသူရအောင် + Mrs. Isiriya ၃၀၀၀၀
၉၀ ) ကိုဟန်ထွန်းမောင် ၃၀၀၀၀
၉၁ ) ကိုမျိုးမြင့်ဦး ၂၀၀၀၀
၉၂ ) ကိုခင်မောင်ချင်း ၃၀၀၀၀
၉၃ ) ကိုသန်းဌေး (ဒါဆန်း) ၃၀၀၀၀
၉၄ ) ဒါဆန်းညီအစ်ကိုများ ၁၈၀၀၀၀
၉၅ ) ကိုဖြိုးသန့်တင် ၃၀၀၀၀
၉၆ ) ကိုသီဟဇော် ၂၀၀၀၀
၉၇ ) ဒါဆန်းရွှေညီအစ်ကိုများ လစဉ်အလှူငွေ ၁၀၀၀၀၀
၉၈ ) ကိုကျော်သူစံ ၂၀၀၀၀
၉၉ ) ကိုနေလင်း ( ဂျီလယန်း ) လစဉ်အလှူငွေ ၁၀၀၀၀၀
၁၀၀ ) ကိုနေလင်း ( ဂျီလယန်း ) သင်္ကန်း (၁) စုံ ၃၀၀၀၀
၁၀၁ ) ကိုရဲမိုးဝင်း ၃၀၀၀၀
၁၀၂ ) မယမင်းထွေး မိသားစု ၅၀၀၀၀
၁၀၃ ) ကိုခင်မောင်ကျော် ၃၀၀၀၀
၁၀၄ ) ကိုရဲရင့်အောင် မိသားစု ၂၀၀၀၀
၁၀၅ ) မိခင်ကြီး ဒေါ်စမ်းမြင့် (သင်္ကန်းတစ်စုံ) ၃၀၀၀၀
၁၀၆ ) ကိုစိုးမြင့်အောင် + ဒေါက်တာနီနီမာ ၃၀၀၀၀
၁၀၇) ကိုသန်းနိုင် + မခင်မြတ်သူ မိသားစု ၃၀၀၀၀
၁၀၈ ) ကိုဘုန်းနိုင် United Brother ၃၀၀၀၀
၁၀၉ ) ကိုရဲစိုးရာဇာ ၃၀၀၀၀
၁၁၀ ) ကိုအောင်ကျော်ထက် + မခင်စုလှိုင် ၃၀၀၀၀
၁၁၁ ) ကိုအာကာနှင့်သူငယ်ချင်းများ ( ၀ဲဂန် ) ၆၀၀၀၀
၁၁၁ ) ကိုဖြိုးဝေ နှင့် သူငယ်ချင်းများ ၃၀၀၀၀
၁၁၂ ) ကိုဇော်ဇော်ထွန်း ၁၀၀၀၀
၁၁၃ ) ကိုကျော်ဝင်း ၁၀၀၀၀
၁၁၄ ) ကိုကျော်ဌေးအောင် ၃၀၀၀၀
၁၁၅ ) ကိုနေလင်းအောင် ၁၀၀၀၀
၁၁၆ ) ကိုညီညီအောင် ၃၀၀၀၀
၁၁၇ ) ကိုအောင်လွင် ၁၀၀၀၀
၁၁၈ ) ကိုကျော်စွာ ၃၀၀၀၀
၁၁၉ ) ကိုညီညီထူး ၊ ကိုအောင်မြင့်ထွန်း နှင့် ကိုတင်အောင်လင်း ၃၀၀၀၀
၁၂၀ ) ကိုကျော်ဇောအောင် ၃၀၀၀၀
၁၂၂ ) ကိုဇော်မင်းထိုက် ၃၀၀၀၀
၁၂၃ ) ကိုကျင်စိန် ၃၀၀၀၀
၁၂၄ ) ကိုအောင်နိုင် ၁၀၀၀၀၀
၁၂၅ ) ကိုအောင်နိုင်ဦး ၁၀၀၀၀၀
၁၂၆ ) ကိုမြင့်သူ (ဂယောင်ဂျူး) ၃၀၀၀၀
၁၂၇ ) ကိုခင်ဝင်း (ဂယောင်ဂျူး) ၅၀၀၀၀
၁၂၈ ) ဂယောင်ဂျူး ရွှေညီအစ်ကိုများ ၂၈၀၀၀၀
၁၂၉ ) ကိုဇေယျာတင့် ၃၀၀၀၀
၁၃၀ ) ကိုမန်းဝင်း ၃၀၀၀၀
၁၃၁ ) ကိုလင်းအောင်စိုး ၁၀၀၀၀၀
မနာပ ဒါယီ စာကြည့်တိုက် အလှူတော် စာရင်းချုပ်
ပဲခူးတိုင်း၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ အုတ်ဝင်းကျေးရွာတွင် တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်မည့် မနာပ ဒါယီဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ၏ “မနာပ ဒါယီ” စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦ အလှူတော်ကို ကိုရီးယားရောက် စိတ္တသုခ မြန်မာဒကာဒကာမများ၏ လှူဒါန်းမှုဖြင့် ယခုအခါ အလှူတော် အလှူရှင်စာရင်း ချုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မနာပ ဒါယီ ဆရာတော်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြေအလှူရှင်များ၊ အဆောက်အဦ အလှူရှင်များ၊ စာအုပ်အလှူရှင်များဖြင့် အများပေါင်းစုကာ တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့သည့် မနာပ ဒါယီ စာကြည့်တိုက်ကို မကြာမီ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်သို့ ကြွရောက်ကာ အပြီးသပ်တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အသေးစိပ် အချက်အလက်မှတ်တမ်းများကို အလှူရှင်များ သဒ္ဓါပွားနိုင်စေရန် နောက်ပိုင်းတွင် မီဒီယာမှတစ်ဆင့် မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလောလောဆယ်တွင် စာကြည့်တိုက် အဆောက်အဦးအတွက် လှူဒါန်းထားကြသည့် အလှူရှင်စာရင်း အချုပ်ကို ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်နိုင်ရန် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၁။ ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ = ၃၀၀၀၀၀ (ဝမ် သုံးသိန်း)
၂။ ယုံရှင်းရွှေညီအစ်ကိုများ = ၄၀၀၀၀၀ (ဝမ် လေးသိန်း)
၃။ ဂျီလယန်းရွှေညီအစ်ကိုများ = ၂၀၀၀၀၀ (ဝမ် နှစ်သိန်း)
၄။ ဝဲဂွန်ရွှေညီအစ်ကိုများ = ၅၀၀၀၀ (ဝမ် ငါးသောင်း)
၅။ ကိုဖြိုးမောင်မောင်ထွန်း = ၃၀၀၀၀ (ဝမ် သုံးသောင်း)
၆။ ကိုသက်နိုင်+မသင်းသင်းဌေး = ၂၀၀၀၀၀ (ဝမ် နှစ်သိန်း)
၇။ ကိုကျော်စွာမင်း = ၁၀၀၀၀၀ (ဝမ် တစ်သိန်း)
၈။ ကိုကျော်သန်း = ၁၀၀၀၀၀ (ဝမ် တစ်သိန်း)
၉။ ကိုစိုးမြင့်အောင် + ဒေါက်တာ နီနီမာ = ၈၀၀၀၀ (ဝမ် ရှစ်သောင်း)
၁၀။ ကိုခင်မောင်ချင်း၊ ကိုဟန်ထွန်းမောင် = ၅၀၀၀၀ (ဝမ် ငါးသောင်း)
၁၁။ ကိုလှမျိုး + မယဉ်မင်းသိန်း = ၁၀၀၀၀၀ (ဝမ် တစ်သိန်း)
၁၂။ ဒါဆန်း၊ ဝဲဂွန်ရွှေညီအစ်ကိုများ = ၁၀၀၀၀၀ (ဝမ် တစ်သိန်း)
၁၃။ ကိုစည်သူ၊ ကိုဇော်သူ၊ ကိုမျိုးမြင့်ဦး၊ ကိုလှမြင့်စိုး = ၆၀၀၀၀၀ (ဝမ် ခြောက်သိန်း)
၁၄။ စိတ္တသုခကျောင်း ဒကာဒကာမများ = ၅၀၀၀၀၀ (ဝမ် ငါးသိန်း)
၁၅။ နှစ်ဖက်မိဘများ အမှူးထား၍ ကိုလင်းထိန်းဝင်း + မမေထက်ထက်လွင် = ၁၀၀၀၀၀ (ဝမ် တစ်သိန်း)
၁၆။ ကွယ်လွန်သူ မိခင်ကြီး ဒေါ်ထွေးသိန်းအား ရည်စူး၍ ကိုမင်းနိုင် + မအေးယုနွယ် မိသားစု = ၁၀၀၀၀၀ (ဝမ် တစ်သိန်း)
အလှူတော်ငွေ စုစုပေါင်း = 3,010,000 (ဝမ် သိန်းသုံးဆယ်၊ တစ်သောင်း)
Posted by cittasukha at 8:03 AM0comments
စုစည်းထားမှု = ၂။ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာများ, ၈။ ဟိုဟိုဒီဒီ သတင်းများ
စိတ္တသုခကျောင်း စုပေါင်းကထိန်အလှူတော် ဖိတ်ကြားခြင်း
ဒယ်ဂူးမြို့၊ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကျိုးဆောင်အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှူ၊ ဂျီလယန်း စက်မှုဇုန် ရွှေညီအစ်ကိုများ၏ ပံ့ပိုးလှူဒါန်းမှု၊ ဆောင်ဆော၊ ဂယောင်ဆန်၊ ဒါဆန်း၊ ဝဲဂွန်၊ ဆောင်ဂျူး၊ ယုံရှင်း၊ နန်းမိ၊ ယုံအမ်း၊ ဂုမိ၊ ဂင်မဲ၊ ဂယောင်ဂျူ၊ ဘူဆန် စသည့် အရပ်ဒေသ အသီးသီးရှိ ရွှေမြန်မာ ညီအစ်ကိုများ၏ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လှူဒါန်းမှုများဖြင့် အများပေါင်းစုကာ ကောင်းမှုပြုကြမည့် စိတ္တသုခ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် အလှူတော်ပွဲတော်တွင် ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ဆွမ်းသင်္ကန်းစသည့် လှူဖွယ်ဝတ္ထု အစုစုတို့ဖြင့် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ကြွရောက်လာသော ဧည့်ပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့အားလည်း ဂျီလယန်းရွှေညီအစ်ကိုများ၏ အထူးစပါယ်ရှယ် ဒံပေါက်ထမင်းတို့ဖြင့် လှူဒါန်းဧည့်ခံကာ ကထိန်အနုမောဒနာတရား နာကြားရင်း ကောင်းမှုအစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်ချ အမျှအတမ်း ပေးဝေကြမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အတူတကွ ကုသိုလ်တော် ယူနိုင်ကြစေရေး အလေးပေးလျက် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ကြပါရန် ရပ်နီးရပ်ဝေးရှိ ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့အား လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် = ၂၃-၁၀-၂၀၁၁ (၁၃၇၃ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁၁ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့)
ကျွေးမွေးဧည့်ခံချိန် = မနက် ၉ နာရီမှ နေ့လယ် ၂ နာရီအထိ
တရားနာချိန် = နေ့လယ် ၁ နာရီ
ဆွမ်းအလှူတော် = အရုဏ် - မုန့်ဟင်းခါ၊ နေ့ဆွမ်း - ကြက်သားဒံပေါက်
ဆွမ်းအလှူရှင် = ဂျီလယန်းစက်မှုဇုန် ရွှေညီအစ်ကိုများ
Posted by cittasukha at 10:21 PM0comments
စုစည်းထားမှု = ၂။ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာများ, ၇။ သာရေး/ နာရေး / လူမှုရေး
စိတ္တသုခကျောင်း စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလှူ ကျင်းပပြုလုပ်မည်
စိတ္တသုခကျောင်း အကျိုးဆောင်အဖွဲ့နှင့် စိတ္တသုခ ဒကာ၊ ဒကာမများ စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဒုတိယအကြိမ် မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၁)ရက်နေ့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဆင်ယင်ကျင်းပမည့် စိတ္တသုခ၏ စုပေါင်း မဟာဘုံ ကထိန်အလှူပွဲတော်တွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် သာသနာပြု ထေရဝါဒ မြန်မာရဟန်းတော်များနှင့် ကိုရီးယားဘုန်းတော်ကြီးများအား ကထိန်းသင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ကထိန်အလှူပွဲသို့ ကြွရောက်လာကြမည့် ဧည့်ပရိတ်သတ်အပေါင်းတို့အား ဂျိလယန်း စက်မှုဇုန် ရွှေမြန်မာ ညီအစ်ကိုများ၏ အထူးစပါယ်ရှင် ဒံပေါက်ထမင်းဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးလှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့ အနေဖြင့် ကထိန်အလှူပွဲ အားခဲ၍ ကြွရောက်ကြပါရန်လည်း ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့များနှင့် အလှူရှင်များက အထူးဖိတ်မန္တက ပြုထားပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့အပြင် ကထိန်သင်္ကန်း အလှူတော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကထိန်သင်္ကန်းတစ်စုံလျင် ဝမ် ၃၀၀၀၀ (ဝမ်သုံးသောင်း)နှုန်းဖြင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင်များထံ ဆက်သွယ်၍ ဖြစ်စေ၊ ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ နီးစပ်ရာ မြန်မာဆိုင်များတွင် ဖြစ်စေ၊ အလှူနေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိမည့် အလှူခံဌာနတွင်ဖြစ်စေ မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျ တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ စုပေါင်း၍သော်လည်းကောင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့များက နှိုးဆော်ထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် တစ်နှစ်မှတစ်ကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်တွင် တစ်ခါသာ လှူဒါန်းနိုင်သည့် စိတ္တသုခကျောင်း၏ စုပေါင်းကထိန်အလှူတော်သို့ ကိုရီးယားရောက် ရွှေမြန်မာများအနေဖြင့်လည်း ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အလှူပွဲကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားခဲ၍ ကြွရောက်ပြီးလျင် အလှူလည်းလှူ၊ တရားလည်းနာ၊ ရွှေမြန်မာများနှင့်လည်းဆုံ၊ အရသာရှိရှိ အစားအစာများလည်း စားသုံးရင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုကို အတူတကွ မျှယူနိုင်ကြပါမည့်အကြောင်း ကြိုတင်သတင်းကောင်းပါးကာ အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကထိန်အလှူအစီစဉ် အသေးစိပ်ကို အလှူရက်နီးကပ်သည့်အခါ ထပ်မံ၍ အသိပေးတင်ပြပါမည်။
Posted by cittasukha at 9:37 PM0comments
ဖခင်ရည်စူး ကုသိုလ်ထူးအတွက် အလေးအနက် ဖိတ်ကြားချက်
ကွယ်လွန်သူ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးခင်မောင် (၈)နှစ်ပြည့်အား ရည်စူး၍ သားဖြစ်သူ ကိုဝင်းမြင့် (ခ) ကိုညီ (ဦးညီ) ၏ ဖခင်ရည်စူး ကုသိုလ်အလှူထူးတွင် ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့အား ဆွမ်းအစရှိသော လှူဖွယ်ဝတ္ထု အစုစုတို့ဖြင့် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းလျက် ကြွရောက်လာသော ဧည့်ပရိတ်သတ် အပေါင်းတို့အားလည်း အထူးစပါယ်ရှင် ကြက်သားပလာတာဖြင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပြီး လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့ကို ဖခင်ကြီးနှင့်တကွ (၃၁)ဘုံ ရှိရှိသမျှ သတ္တဝါအပေါင်းအား ရေစက်သွန်ချ အမျှအတမ်း ပေးဝေကြမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်နီးရပ်ဝေး မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့် အတူတကွ ကုသိုလ်တော်ယူနိုင်ကြစေဖို့ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် = ၉-၁၀-၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ဧည့်ခံကျွေးမွေးချိန် = နံနက် (၇)နာရီမှ နေ့လယ် (၁)နာရီအထိ
တရားနာချိန် = နေ့လယ် (၁)နာရီ
ကိုဝင်းမြင့် (ခ) ဦးညီ
Posted by cittasukha at 8:14 PM0comments
လစဉ်တရားပွဲနှင့် ရွှေညီအစ်ကိုများတွေ့ဆုံပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
ကျနော်တို့ ရွှေမြန်မာများအတွက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်တရားများ တိုးပွားလာရေး ၊ မကောင်းမှု အကုသိုလ်များ လျော့ပါး ကင်းစင်ရေး ၊ ဓမ္မအမြင် လောကအမြင် စသည့် အသိဥာဏ်များ ပွင့်လန်းလာစေရေး ၊ သူငယ်ချင်းများ အချင်းချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ညီအစ်ကို ရင်းချာများကဲ့သို့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီး လာကြစေရေး ၊ အခက်အခဲများကို စုပေါင်းအဖြေရှာ၍ ကူညီရိုင်းပင်းကြသော ကောင်းမြတ်သော အလေ့အကျင့်များ ထွန်းကားလာစေရေး စတဲ့ စတဲ့ များလှစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေရန်အတွက် စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ လစဉ် အလှူပွဲ ၊ တရားပွဲများ နဲ့ ရွှေမြန်မာ တွေ့ဆုံပွဲများကို ကျင်းပလျက်ရှိရာ ယခု စက်တင်္ဘာလမှာလည်း လစဉ်တရားပွဲ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီပွဲမှာ စိတ္တသုခ အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့နဲ့ ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့တို့က ဟန်ချက်ညီ ပေါင်းစပ်လျက် စိတ်ကောင်းစေတနာ တို့ဖြင့် မြန်မာ ထမင်းဟင်း များကို လက်စွမ်းပြ ချက်ပြုတ်ပြီး ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြွရောက်ခဲ့ကြပါဦးလို့ တလေးတစားနဲ့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ် ၊ အစီအစဉ် အသေးစိတ်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား
နေ့ရက်= ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)
တရားနာချိန် = နေ့လယ် (၁) နာရီ
ဧည့်ခံချိန် = မနက် ၁၀နာရီမှ နေ့လယ် ၂ နာရီအထိ
အစားအသောက် = မြန်မာ ထမင်းဟင်း ၊ ကော်ဖီ
Posted by Unknown at 5:49 AM0comments
စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ ဆောရပ်ဆန် (설악산) ခရီး မှတ်တမ်း ပုံရိပ်များ
ကိုဝင်းနိုင်ဦး (ပြန်ကြာရေးမှူး)မှ မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြပါသည်။
ချူဆောက်ပိတ်ရက် (၁၃-၉-၂၀၁၁) ရက်နေ့တုန်းက စိတ္တသုခ ဆရာတော်နဲ့တကွ ကျောင်းအကျိုးဆောင်များနဲ့ အဖွဲ့သားများဟာ ဂန်ဝမ်ဒို (강원도) ဒေသရှိ နာမည်ကြီး ဆောရပ်ဆန် (설악산) အပါအ၀င် 산 척၊ 명덕 စတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေ နေရာများကို အပန်းဖြေခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ် ၊ သာယာလှပတဲ့ ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုခဲ့ရသလို လတ်ဆတ်အေးမြတဲ့ တောင်ပေါ်လေနဲ့ ပင်လယ်လေတို့ကိုလည်း ရှုရှိုက်ခဲ့ရပါတယ် ၊ မီတာ (၇၀၀) အမြင့်ကို cable car နဲ့ တက်သွားရတာကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ် ၊ တောင်ခြေမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တော်ကြီးကိုလည်း ဖူးမျှော်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကုသိုလ်တွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။ ဓါတ်ပုံ ၀ါသနာရှင်များအတွက်ကတော့ ပိုလို့တောင် ရင်ခုန်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ် ၊ အကြောင်းကတော့ ဂယ်မြောင်တက္ကသိုလ် 겨몡대학교မှ Slovenia ကျောင်းသူလေး မခဲယာ (နာမည်ကို သေချာမမှတ်မိပါ) ကလည်း လိုက်ပါလာတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ မင်းသားများနဲ့ တစ်လှည့်စီတွဲပြီး ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ခဲ့ကြတာ အမှတ်ရစရာပါ ။ ဒီတစ်ခေါက် အပန်းဖြေခရီးဟာ အချိန်နီးကပ်မှ စီစဉ်လိုက်ရတဲ့အတွက် အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကြိုတင်ပြီး အသိမပေးလိုက်ရပါဘူး ၊ ဒါကြောင့်မို့ ပိတ်ရက်ခရီးစဉ်ဆွဲပြီးသူတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်စီစဉ်ပြီးသူတွေ မပါဝင်လိုက်ရသလို ဖြစ်သွားပါတယ် ၊ နောက်အစီအစဉ်များမှာတော့ အခုထက်ပိုပြီး ကြိုကြိုတင်တင် ဖိတ်ကြားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ၊ တကယ်တော့ ဒီခရီးစဉ်ဟာ အပျော်သဘောသက်သက်မဟုတ်ပဲနဲ့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့သားတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ နီးနီကပ်ကပ် ရှိနေကြစေလိုတဲ့အတွက် စုပေးတဲ့ ( Gathering လုပ်တဲ့ ) သဘောမျိုးပါ ။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်တော့ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ကျနော်တို့ သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ အခု ဒီမှာတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲက ရယူလိုသူများ / ဖျက်ပေးလိုသူများ ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်ပါခင်ဗျား
Cittasukha First Tour - picture slideshow
Posted by cittasukha at 7:18 AM0comments
စုစည်းထားမှု = ၅။ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ, ၈။ ဟိုဟိုဒီဒီ သတင်းများ
စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ အများပေါင်းစု၍ ဂန်ဝမ်ဒို၊ ဆောရပ်ဆန်ဒေသ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ကြမည်
ကိုရီးယားရောက် ရွှေမြန်မာများ ကိုယ်စိတ်နွမ်းသမျှ လန်းလာကြစေရန်နှင့် ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ ရကြပါစေရန် ရည်ရွယ်၍ စိတ္တသုခကျောင်းဆရာတော်နှင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့များမှ ဦးဆောင်၍ ချူဆောက်ပိတ်ရက်များမှ နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သည့် (၁၃-၉-၂၀၁၁)ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂန်ဝမ်ဒို (강원도)ဒေသရှိ နာမည်ကြီး ဆောရပ်ဆန် (설악산)နှင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေစသည့် နေရာများသို့ နေ့ချင်းပြန်ခရီး သွားရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆောရပ်ဆန်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် နာမည်ကြီးသည့် လှပသည့် တောတောင်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဂန်ဝမ်ဒိုဒေသရှိ ပင်လယ်မြင်ကွင်းနှင့် အခြားအခြားသော ရှုချင်စဖွယ် မြင်ကွင်းအသွယ်သွယ်သည်လည်း ကိုရီးယားရောက် နိုင်ငံခြားသားများ အနေဖြင့် သွားရောက် လေ့လာသင့်သည့် နေရာဒေသများ ဖြစ်ပါသဖြင့် ထိုဒေသသို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ကြရန် စိတ္တသုခ ကျောင်းအကျိုးဆောင်များက ဦးဆောင်ကာ ဤခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤခရီးစဉ်တွင် ကားခ၊ စားစရိတ် အပါအဝင် ဝင်ကြေးမှအစ ခရီးစဉ်အစအဆုံးကို ဝမ်၆၀၀၀၀ (ဝမ်ခြောက်သောင်း)နှုန်း သတ်မှတ်ထားပြီး အမှတ်တရ အနေဖြင့် စိတ္တသုခ လိုဂိုတံဆိပ်ပါသည့် အင်္ကျီများကိုလည်း လက်ဆောင်ပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
ထို့အပြင် ဤခရီးစဉ်တွင် လူ(၄၅)ယောက်ဆန့် ကာကြီးတစ်စီးစာသာ ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် ဤခရီးစဉ်နှင့်အတူ လိုက်ပါလိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးဆောင်များထံ ဆက်သွယ်လျက် (၉-၉-၂၀၁၁) ရက်၊ သောကြာနေ့ကို နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်း ကြပါရန်နှင့် (၁၃)ရက်နေ့ မနက်အစော (၄)နာရီခွဲတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ စတင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သဖြင့် လိုက်ပါမည့် သူများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် လာရောက်အိပ်စက်၍ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့် သီးသန့်လာရောက်၍ဖြစ်စေ မနက် (၄)နာရီခွဲအရောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လာရောက်ကြပါ ရန်လည်း ကြိုတင်၍ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိပ်သိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးဆောင်များထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Posted by cittasukha at 2:55 AM0comments
စုစည်းထားမှု = ၂။ ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာများ, ၄။ အထွေထွေ, ၈။ ဟိုဟိုဒီဒီ သတင်းများ
စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ မြန်မာပြည်အလှူ ပုံရိပ်မှတ်တမ်း
ကိုရီယားနိုင်ငံ၊ ဒယ်ဂူးမြို့၊ စိတ္တသုခကျောင်းဆရာတော် နှင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်သည့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ တတိယအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို အကြောင်းပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့ရှိ ဂရိမုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသည့် အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်လည်း သံဃာတော်အပါး (၂၀)ကျော်အတွက် ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား အယောက် (၄၀)အတွက် ပညာရေးအလှူ၊ တစ်နေ့တာဆွမ်းအလှူနှင့် ကျောင်းအလှူတော် စသည်ဖြင့် ကိုရီးယားဝမ် သိန်း (၂၀)ကျော် (မြန်မာငွေ ၁၅သိန်းတိတိ)ကိုပါ ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအလှူနဲ့ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းပေးပို့မှု အခက်အခဲများကြောင့် တင်ပြရန် အနည်းနောက်ကျသော်လည်း ယခုရရချင်း စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်စေဖို့ အလှူမှတ်တမ်းပုံရိပ်များကို တင်ပြအပ်ပါသည်။ နောက်နောင်လည်း နှစ်စဉ်တစ်နှစ်ကို (၂)ကြိမ်ခန့် မြန်မာပြည်ရှိ လိုအပ်သည့် နေရာများကို စုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းကြမည် ဖြစ်သဖြင့် စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ အလှူများသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်သာမက မြန်မာပြည်တွင်းသို့ပင် အကျိုးပြုပေးနေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါသည်။
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို READ MORE... နှိပ်ပြီး ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by cittasukha at 11:11 PM0comments
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား) ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့သားများ၏ စုပေါင်းအစည်းဝေးမှတ်တမ်း
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား) ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့သားများ၏ စုပေါင်းအစည်းဝေးကို ၁၄-၈-၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေ) နေ့တွင် ဤကျောင်း၌ပင် ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။ အစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်နာယက ဆရာတော် ၊ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့နှင့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သား ဒကာဒကာမများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည် ။
အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ခွဲစိတ်ကုသမှု အခြေအနေအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စများကိုဆွေးနွေးရန် ၊ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ၊ ကျောင်းရေရှည် တည်တန့်ရေးအတွက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးညှိနှိင်းရန်တို့ဖြစ်ပါသည် ။
ပထမဦးစွာ အခမ်းအနားကို နမောတဿ သုံးကြီမ်ရွတ်ဆို၍ ဖွင့်လှစ်ကြပါသည် ။
ထို့နောက် ဆရာတော်က ဒကာဦးရွှန်းဝင့်နွယ်၏ လောလောဆယ်ရှိနေသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ၊ ဆက်လက်ကုသရန် အခြေအနေများ ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသော ထောက်ပံ့မှုများ ကို ရှင်းလင်းပါသည် ၊ ဒကာများကလည်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကောက်ခံရရှိမှုများကို တင်ပြလျှောက်ထား၍ လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးလျှောက်ထားကြပါသည် ။
ဆက်လက်၍ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့သစ်ကို တက်ရောက်လာကြသူများ၏ သဘောထားကို ရယူလျှက် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် ။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ အမည်စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား)
ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တ	=	ဦးဆောင်နာယက
ဦးရွှန်းဝင့်နွယ်	=	ဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက
၁။	ဦးမင်းနိုင်	=	ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဦးမျိုးညွန့်သိန်း (ဆရာကျောင်း)	=	ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	ဦးဝင်းနိုင်ဦး	=	ပြန်ကြားရေးမှူး
၄။	ဦးဘုန်းနိုင်	=	အတွင်းရေးမှူး
၅။	ဦးလင်းထိန်ဝင်း	=	ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၆။	ဦးကျော်ကျော်မင်း	=	တွဲဘက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၇။	ဦးသိန်းထွန်းမောင် (ဂယောင်ဆန်)	=	အဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးအောင်ကျော်ငြိမ်း (ဆောင်ဂျူး)	=	အဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးစိုးမင်း(ဂယောင်ဆန်)	=	အဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဦးဇော်ထက်ဦး (ဝဲဂွန်)	=	အဖွဲ့ဝင်
၁၁။	ဦးသန်းဌေး (ဒါဆန်း)	=	အဖွဲ့ဝင်
၁၂။	ဦးဇော်ထူးအောင် (ဂယောင်ဆန်)	=	အဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ဦးအောင်နိုင် (ဂယောင်ဂျူး)	=	အဖွဲ့ဝင်
၁၄။ ဦးစိန်ချွန် (ဆောင်ဆော)	=	အဖွဲ့ဝင် တို့ဖြစ်ပါသည် ။
အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ ကျောင်းရေရှည် တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ကြပါသည် ၊ ဆရာတော်သည် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တ ပြန်လည်ကြွရောက်၍ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်ရန် ရှိနေသဖြင့် ဤဒေဂူးကျောင်း၌ ဆရာတော် မရှိသည့်အခိုက်တွင်လည်း ကျောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ဆောင်ရန် ကိစ္စများကို အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ရှိနေစေရန် ၊ လစဉ်ဆိုသလို တရားပွဲများ ကျင်းပရန် စသည့် လိုအပ်သည့် အစီအစဉ်များကို ဆရာတော်က မှာကြားပါသည် ။
၄င်းနောက် အစည်းအဝေးကို “ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတု” သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည် ။
အစည်းအဝေးတွင် အဟာရဒါနအဖြစ် ဘူးသီကြော် ၊ ရွှေရင်အေး စသည့်စားသောက်ဖွယ်ရာများကို စီမံဧည့်ခံခဲ့ကြသော ဦးမင်းနိုင် ၊ ကိုလင်းထိန်ဝင်း ၊ ကိုသက်နိုင် + မသင်းသင်းဋ္ဌေး ၊ ကိုဋ္ဌေ:အောင် ၊ ကိုလတ် နှင့် အားလုံးသော ဝေယျာဝစ္စ အဖွဲ့သားများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည် ။
ဂျီလျန်း စက်မှုဇုန်မှ ရရှိသော လစဉ်အလှူငွေများ
ဂျီလျန်း စက်မှုဇုန်မှ ရရှိသော လစဉ်အလှူငွေများကို တင်ပြပါသည် ၊
ဧပြီလအတွက် ….. (၀မ်) ၄၀၀၀၀၀
မေလအတွက် …. (၀မ်) ၄၃၀၀၀၀
ဇွန်လအတွက် ….. (၀မ်) ၄၃၀၀၀၀
ဇူလိုင်လအတွက် …(၀မ်) ၄၃၀၀၀၀
ကြိုတင်လှူဒါန်းငွေ (၀မ်) ၈၀၀၀၀ ( ကိုဖြိုးကို နှင့် ကိုတင်ဝင်းအောင် )
စုစုပေါင်း …………….. (၀မ်) ၁၇၇၀၀၀၀ ဖြစ်ပါသည် ၊
အလှူရှင်များစာရင်းကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည် ၊ အမည်စာရင်းကျန်ရှိနေပါက နောက်တစ်ကြိမ်တွင် တင်ပေးပါမည် ၊ ယခုကဲ့သို့ ထက်သန်သော သဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူဒါန်းသူများအား ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ၊ ဘေးရန်ကင်းကွာ၍ စိတ်အေးချမ်းစွာ ရှိကြစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါသည် ။ အလှူရှင်များမှာ …
ကိုစိုးမင်း .......	30000
ကိုဟန်ဝင်းသူ ....	10000
ကိုကျော်မျိုးခိုင် ...	10000
ကိုအောင်ဆန်းဦး	... 10000
ကိုမင်းခင် ........... .10000
ကိုညီညီ ...........	10000
ကိုဖြိုးကို ...........	10000
Posted by cittasukha at 5:34 PM0comments
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား) ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့နှင့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ စုပေါင်းအစည်းဝေးကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဆောင်စော၊ ဂယောင်ဆန်၊ ယုံရှင်း၊ ဝဲဂွန်၊ ဒါဆန်စသည့် ဒေသအသီးသီးရှိ ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ အနေဖြင့် မပျက်မကွက် ကြွရောက်၍ အကြံပြုဆွေးနွေးပေးကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် = ၁၄-၈-၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အချိန် = နေ့လယ် (၂) နာရီ
Posted by cittasukha at 4:25 PM0comments
ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးလှူဒါန်းသူများ (၂)
ကိုဝင်းနိုင်လတ်(ကယား) ……………………………… ၀မ် ၃ သိန်း
ကိုစိုးမိုးထက် ……………………………………………… ၂ သိန်း
ကိုဘိုမင်း ………………………………………………… ၂ သိန်း
ကိုသော်တာ …………………………………………… ၁ သိန်း ၅ သောင်း
ကိုလင်းထိန်ဝင်း …………………………………… … ၁ သိန်း ၅ သောင်း
ကိုမင်းနိုင် ……………………………………………… ၁ သိန်း ၅ သောင်း
ကိုစည်သူ၊ ကိုဇော်သူ ………………………………… ၁ သိန်း ၅ သောင်း
ကိုမျိုးမြင့်အောင် ………………………………………… ၁ သိန်း
ကိုစလေ ………………………………………………… ၁ သိန်း
ကိုချမ်းမင်းထွန်း ………………………………………… ၁ သိန်း
ကိုဇော်မင်းထွန်း ………………………… …………… ၁ သိန်း
ကိုဇော်ဇော် …………………………………………… ၁ သိန်း
ကိုမျိုးနိုင်………………………………………………… ၁ သိန်း
ကိုမင်းထွဋ်………………………………………………… ၅ သောင်း
ကိုမျိုးမြင့်ခိုင်……………………………………………… ၅ သောင်း
၈.၈.၂၀၁၁ ထိ အလှူခံရရှိသူများစာရင်း။
အလှူခံ ရရှိသူများစာရင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။
Posted by cittasukha at 8:05 AM0comments
၁။ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း …………………………………၀မ် ၁၀ သိန်း
၂။ စိတ္တသုခ လူမှုကူညီရေးအသင်း .................................................... ၅ သိန်း
၃။ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ …………………………………………………… ၁ သိန်း
၄။ ဆရာတော်ဦးသုဝဏ္ဏ ……………………………………………… …… ၁ သိန်း
၅။ ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ ……………………………………………………… ၁ သိန်း
၆။ ကိုအောင်နိုင် (ဂယောင်ဂျူး) နှင့် ကိုကျော်သူရ (စင်္ကာပူ) ……………… ၁၀ သိန်း
၇။ ကိုမျိုမင်းသန့်နှင့် သူငယ်ချင်းများ ……………………………………… ၇ သိန်း
၈။ ကိုသက်နိုင် + မသင်းသင်းဌေး…………………………………………… ၆ သိန်း
၉။ ကိုစိုးပိုင်(အင်ချွန်းမြို့ )…………………………………………………… ၆ သိန်း
၁၀။ ကိုဂျာမင်း…………………………………………………………………… ၅ သိန်း
၁၁။ (၀ယ်ဂွမ်) ထယ်ဂျင်းစက်ရုံမှ ညီအစ်ကိုများ……………………………… ၄ သိန်း
၁၂။ ဆရာကျောင်း …………………………………………………………… ၃ သိန်း
၁၃။ ကိုဝင်းနိုင်ဦး……………………………………………………………… ၃ သိန်း
၁၄။ ကိုဇော်မင်းလေး………………………………………………………… ၃ သိန်း
၁၅။ ကိုအောင်ဇော်ဝင်း(ဖျောင်းတက် မြို့) …………………………………… ၃ သိန်း
၁၆။ ကိုဇော်ဝင်းထွန်း ………………………………………………………… ၃ သိန်း
၁၇။ ကိုစိုးနိုင်သောင်း (အင်ချွန်းမြို့ )…………………………………………… ၃ သိန်း
၁၈။ ကိုအောင်ကျော်ငြိမ်း ကိုရဲမြင့် …………………………………………… ၃ သိန်း
၁၉။ ကိုဇေယျာတင့်…………………………………………………………… ၂ သိန်း
၂၀။ ကိုဌေးအောင်…………………………………………………………… ၂ သိန်း
၂၁။ ကိုမြကြီး………………………………………………………………… ၂ သိန်း
၂၂။ ကိုအောင်ကောက်……………………………………………………… ၂ သိန်း
၂၃။ ကိုစိုးမြင့်အောင်+ဒေါက်တာနီနီမာ……………………………………… ၂ သိန်း
၂၄။ ကိုနေမျိုး……………………………………………………………… ၁ သိန်း ၅သောင်း
၂၅။ ကိုဥာဏ်ဝင်းမင်း.(ချောင်နန် မြို့ )…………………………………….. ၁ သိန်း ၅သောင်း
၂၆။ ကိုမင်းသက်…………………………………………………………… ၁ သိန်း
၂၇။ ကိုအောင်နိုင်ဝင်း ……………………………………………………… ၁ သိန်း
၂၈။ ကိုပြည့်ဖြိုးမောင် ……………………………………………………… ၁ သိန်း
၂၉။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ ………………………………………………………… ၁ သိန်း
၃၀။ ကိုမျိုးလွင်အောင်……………………………………………………… ၁ သိန်း
၃၁။ ကိုစိုးမိုးနိုင်…… ……………………………………………………… ၁ သိန်း
၃၂။ ကိုဇော်ထိုက်…………… …………………………………………… ၁ သိန်း
၃၃။ ကိုအောင်မျိုးထွန်း…………………………………………………… ၁ သိန်း
၃၄။ ကိုဝေလုဇော်………………………………………………………… ၁ သိန်း
၃၅။ ကိုစောလင်းစိုး………………………………………………………… ၁ သိန်း
Posted by cittasukha at 7:25 AM0comments
စုစည်းထားမှု = ၇။ သာရေး/ နာရေး / လူမှုရေး, ၈။ ဟိုဟိုဒီဒီ သတင်းများ
ဆိုင်ကယ်တိမ်းမှောက်မှုဖြင့် ဒယ်ဂူးမြို့၊ ကက်သလစ်ဆေးရုံကြီး အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည့် ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တာဝန်ခံ ဆရာဝန်ကြီး၏ ပြောပြချက်အရ “လိုအပ်သည့် ခွဲစိပ်ကုသမှုများကို လိုအပ်သလို ကုသပေးနေပြီး ကွဲသွားသည့်ခေါင်းနှင့် ကျိုးသွားသည့် နာဖူးရိုး၊ နာခေါင်းရိုး၊ လည်ပင်းညှပ်ရိုးနဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံး တို့မှာ စိုရိမ်ဖွယ်မရှိတော့ကြောင်း၊ သို့သော် ညာဘက်မျက်လုံးနဲ့ အဓိက ခါးရိုးများအတွက် ခွဲစိပ်ကုသမှုအပိုင်းကို အထူးစောင့်ကြပ်ကာ ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလောလောဆယ်တွင် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်၌ နောက်ထပ် တစ်ပတ်ကျော်ခန့် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ကုသမှုကို ခံယူရန်လိုအပ်ပြီး အခြေအနေကောင်းမွန်ပါက အသေးစိပ် ခွဲစိပ်ကုသမှုကို ခံယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုးရိမ်ဖွယ်မှာ ခါးရိုးကြိုးသွားသည့် အချက်ကြောင့် အောက်ပိုင်းအကြောများ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့မှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး အောက်ပိုင်းသေသွားမှုလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အထူးကြိုးစားပြီး ကုသပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် သိရှိရပါသည်။
ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ အခြေအနေမှာ အလွန်ပြင်းထန်သည့်အလျောက် ကုသသည့်အပိုင်းမှာလည်း အချိန်ယူကာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကုသရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း အလွန်ပင်များပြားနိုင်ကာ သိန်းရာဂဏန်း အထက်မှာပဲ ရှိနိုင်ကြောင်း ဆေးရုံတာဝန်ခံများက ဆိုပါသည်။ ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကလည်း ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အထူးဝိုင်းဝန်းကြမည် ဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို ရရှိနိုင်ရေးလည်း ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောဆိုကြပြီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးသို့လည်း ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှု ရရှိရေးအတွက် မေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်သည် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကျော်ကျော်ခန့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသမှုကို ခံယူနေရဦးမည် ဖြစ်သဖြင့် ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်အား တွေ့ဆုံအားပေးလိုသူ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့် မနက် (၇)နာရီမှ၊ (၈)နာရီ၊ ညနေ (၇)နာရီမှ (၇)နာရီခွဲ အချိန်အတွင်း သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးနိုင်ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ကျန်းမာရေး သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားသလို ထပ်မံတင်ပြ ပေးသွားပါမည်။
Posted by cittasukha at 7:54 AM0comments
မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးအလွန် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း
ဒယ်ဂူးမြို့၊ယုံရှင်းစက်မှုဇုံ၊ ယုံရှင်းဂုံဒန်းတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုရွှန်းဝင့်နွယ် (စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စာရေးဆရာ ဘလောဂ်ဂါ ကိုဝင်းလတ်)သည် ၃-၈-၂၀၁၁ရက်နေ့၊ (မနေ့က) ညနေချမ်းအချိန်တွင် မိုးသဲသဲ၌ ဆိုင်ကယ်လမ်းချော် ဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက်၍ ကုန်းမြင့်ပေါ်မှအောက်သို့ ကျရောက်ပြီး ကျောက်တုန်းကျောက်ခဲများဖြင့် ထိခိုက်မိကာ တကိုယ်လုံးတွင် အလွန်ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာအနာတရ ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ ကက်သလစ်ဆေးရုံ၊ အရေးပေါ်ခန်းတွင် လိုအပ်သည့် အရေးပေါ်ကုသချက်များကို ရယူထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် အသက်အန္တရယ်မှာ စိုးရိမ်မှု မရှိတော့ကြောင်း၊ သို့သော် နာဖူးရိုး၊ မျက်ခုံးရိုး၊ နှာခေါင်းရိုး၊ လည်ပင်းညှပ်ရိုး၊ ခါးရိုးများ ကြိုးသွားပြီး ဘယ်ဘက်မျက်လုံးမှာလည်း အလွန်ထိခိုက်သွားသဖြင့် ကုသမှုအပိုင်းမှာ အထူးစိုရိမ်နေရကြောင်း၊ ကုသမှုများ ကောင်းမွန်အောင်မြင်သွားသော်လည်း အကောင်းပတိအတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ်ဖို့ရန်မှာ မလွယ်လှကြောင်း၊ ခါးရိုးကြိုးသွားမှုကြောင့် အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာ လှုပ်ရှားမှု ရဖို့အတွက် အထူးစိုးရိမ်နေရကြောင်း စသဖြင့် ဆေးရုံရှိ တာဝန်ရှိသူများမှတစ်ဆင့် ကြားသိရပါသည်။
ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ လက်ရှိအနေအထားမှာ တရားမဝင် အလုပ်သမား ဖြစ်နေသည်က တစ်ကြောင်း၊ စက်ရုံအတွင်း ထိခိုက်မှုဖြစ်ခြင်း မဟုတ်သဖြင့် လျော်ကြေးရရှိမှုမှာလည်း မဖြစ်နိုင်သည်က တစ်ကြောင်း၊ ထိခိုက်မှုများမှာ အလွန်ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် ကုသမှုအပိုင်းမှာ ဆေးဖိုးအကုန်အကျများလည်း အလွန်ပင် များပြားနိုင်သည်က တစ်ကြောင်း စသည်စသည့် အကြောင်းများကြောင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ အဖက်ဖက်မှ စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေမှန်ကို သိရှိနိုင်ကြစေရန်နှင့် ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ အဖြစ်ဆိုးကို တတ်နိုင်သည့်အားဖြင့် ဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်နိုင်ကြစေရန် အဖြစ်မှန်ကို အသိပေးတင်ပြရင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးလှူဒါန်းပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ကူညီပံ့ပိုး လှူဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဖြစ်စေ၊ ဖော်ပြဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲအပ်၍ဖြစ်စေ ထောက်ပံ့ကူညီ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ကျန်းမာရေး သတင်းကို ထူးခြားသလို ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမည်။
၁။ ကိုနေလင်း (ရွှေကမ္ဘာ မြန်မာဆိုင်၊ ၀၁၀-၆၂၇၉-၅၂၉၉)
၂။ ကိုဘုန်းနိုင် (UB မြန်မာဆိုင်၊ ၀၁၀-၅၆၅၈-၂၂၅၀)
၃။ ကိုဇေယျာတင့် (၀၁၀-၉၈၃၈-၁၉၈၆)
ဘဏ်အကောင့် = 07 91 0004685 (DAEGU BANK- MAUNG KYAW KYAW MIN)
Posted by cittasukha at 7:22 AM0comments
ဆရာဒကာတို့၏ အောင်ပွဲ (၃)
ပြီးခဲ့သည့် ၁၇-၇-၂၀၁၁ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့က ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ စိတ္တသုခ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ကျွန်တော်တို့ စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပွဲကို စုပေါင်းညီညာစွာ ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဆရာဒကာတို့၏ အောင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် နှလုံးသားတွင် ကမ္ဗည်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ပုံမှန်ကျင်းပနေကျ အလှူမျိုးဆိုလျှင် စာတစ်တန်ပေတစ်တန်ဖွဲ့၍ အောင်ပွဲတစ်ခုအဖြစ် ရေးသားတင်ပြဖွယ် မလိုသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတော်အပေါ် ထားရှိကြသည့် ဆရာဒကာများ၏ စစ်မှန်သည့်စေတနာ၊ ထက်သန်သည့်သဒ္ဓါနှင့် ပြင်းထန်သည့် ကြိုးစားမှုများအပေါ် အနီးကပ်မြင်တွေ့နေရသည့် ကပ္ပိယ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ထက်တူထပ်မျှ ဝမ်းသာပီတကျခဲ့ရသဖြင့် ကျွန်တော်၏ ရင်ထဲကပီတိကို အခြားသူများလည်း မျှဝေခံစားနိုင်စေရန် စိတ်စေတနာအမှန်ဖြင့် တစ်ဆင့်ခံစားကာ အနုမောဒနာ ပွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့က ကျွန်တော်တို့အများအား အနုမောဒနာ ပွားစေခဲ့သည့် အလှူများမှာ အမျိုးအစားအားဖြင့် စုံလင်လှသည်။ ဒါဆန်နှင့်ဝဲဂွန်ရှိ ရွှေညီအစ်ကို တစ်စု၏ ဆွမ်းအလှူ အပါအဝင် စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ သင်္ကန်းအလှူ၊ ဆွမ်းအလှူ၊ ပညာရေးအလှူ၊ ကျောင်းအလှူနှင့် လူမှုရေးအလှူစသည်ဖြင့် ဒါနအမျိုးအစားများ အထူးများပြားခဲ့ကြပေသည်။ ထိုသို့ မျိုးစုံလှူရ မြတ်ဒါနကြောင့် ထိုနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် အလှူပွဲကို ဆရာဒကာတို့၏ အောင်ပွဲဟု ကျွန်တော်အနေဖြင့် တင်စားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ ယခုတစ်ကြိမ် လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့သည့် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားများ၏ အလှူများသည် မတူညီသည့် အလှူများနှင့်အတူ ထူးခြားသည့် အလှူများလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အလှူဟု အမည်တပ်ခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လှူဖြစ်ခဲ့သည့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ အလှူသည် သံဃိကအလှူ၊ စီဝရဒါနအလှူ၊ ပညာဒါနအလှူ၊ လူမှုရေးအလှူများအဖြစ် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လှူဒါန်းခွင့်ရခဲ့သည့် အလှူများ ဖြစ်နေပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်လည်း ထိုနည်းအတူ အလှူမျိုးစုံ ပြည့်စုံခဲ့ရုံတွင်မက ကာလဒါနနှင့် ဝိဟာရဒါနခေါ် ကျောင်းအလှူပင် လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာတော်နှင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင်များ ဦးဆောင်ပြီး စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ စုပေါင်းလှူဒါန်းမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိအလှူကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့ရှိ အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၌ သံဃာတော် အပါးနှစ်ဆယ်အား ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ဆယ်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူ အယောက်လေးဆယ်ကျော်တို့အား လိုအပ်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာများ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်း၊ ဆွမ်းစာရိတ် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းစတဲ့ အလှူတို့ကို ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်ကား ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် လူမျိုးစုံ၊ အလှူမျိုးစုံဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
အလှူနေ့က မြင်ကွင်းအချို့ကို ပြန်လည်မြင်ယောင် ကြည့်မိသည့်အခါ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် အလွန်ပင် ကြည်နူးမှု ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပူပြင်းလှသည့် ကိုရီးယား ရာသီအပြောင်းကာလတွင် စိတ္တသုခကျောင်းသို့ ရောက်လာကြသည့် ဒကာဒကာမများမှာ မမောနိုင်၊ မပန်းနိုင် အပြုံးခိုင်များဖြင့် ဆရာတော်များနှင့် စကားပြောသူများကပြော၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် လက်စုံကျသူများကကျ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ရှေ့နောက်ရောက်လာကြသည့် စီနီယာဂျူနီယာများနှင့် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်သူများကဖလှယ် စသည်ဖြင့် တစ်စည်းတစ်လုံး၊ တစ်စိပ်တစ်ဝမ်းတည်း ဖြစ်နေကြသည်မှာ “မြန်မာတွေဟာ မညီကြဘူး”ဆိုသည့် စကားများကို ထုချေပစ်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ပရိတ်သတ်များအား ဧည့်ခံကျွေးမှုများ ပါးသွားသည့်အခါ စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ ကိုရီးယား+မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည့် အလှူဒါနများကို အကြောင်းပြုသည့် အနုမောဒနာတရား နာကြားပွဲနှင့် စုပေါင်းအမျှဝေပွဲ အခမ်းအနားကို နေ့လယ် (၁)နာရီခန့်တွင် စတင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပူပြင်းလှသည့် ရာသီဥတုတွင် တရားနာပရိတ်သတ်များကလည်း နေရာအပြည့်ရှိနေသဖြင့် ပို၍ပူလွန်းလှသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ကုသိုလ်အစွမ်းများဖြင့် ပီတိလွှမ်းနေကြသဖြင့် အခန်းအနားတစ်လျှောက်လုံးတွင် ပျော်တစ်ပြုံးပြုံးဖြင့်ပင် အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ အထံတော်မှ သီလပေးနှင့် ရေစက်ချတရား နာကြားကြပြီး ဆရာတော်ဦးသုဝဏ္ဏအထံတော်မှ အနုမောဒနာတရား နာကြားဖြစ်ခဲ့ကြကာ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းနိုင်ဦးက ထိုနေ့ကလှူဒါန်းကြသည့် အလှူများနှင့် အလှူရှင်စာရင်းကို ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်နိုင်စေရန် အသိပေးဖတ်ကြားပြီးနောက် ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှန်ဝင့်နွယ်က အလှူနှင့်ပတ်သက်သည့် ကြည်နူးဖွယ်ရာ ပီတိစကားကို ပြောကြားလျှောက်ထားပါသည်။
ပီတိသိပ်အားကြီးလျှင် မျက်ရည်ပင်လည်တတ်သည်ဟု ဆိုသည့်အတိုင်း ပီတိစကားပြောကြားခဲ့သည့် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှန်းဝင်နွယ်မှာ စကားပြောရင်း အသံတိမ်ဝင်ကာ မျက်ရည်ပင်လည်ခဲ့သည်ကို ကျွန်တော်တို့ ပရိတ်သတ်အများလည်း ထပ်တူခံစားခဲ့ရပါသည်။ ဦးရွှန်းဝင့်နွယ်က မြန်မာပြည်၊ ရခိုင်ဒေသရှိ၊ ဂိရိမုန်တိုင်းဒဏ်ခံ အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း ဆရာတော်နှင့် အလှူကိစ္စအကြောင်း စကားပြောဆိုရင်း ဆရာတော်ထံမှ သိရှိရသည့် ခံစားမှုများကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ပြောရင်းပြောရင်းနှင့်ပင် ဦးရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ရင်ထဲကလာသည့် ဝမ်းသာစကားနှင့် ဝမ်းသာလွန်း၍ ကျခဲ့ရသည့် မျက်ရည်များကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး နားလည်ခံစားမိခဲ့ရပါသည်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တကလည်း အလှူတစ်ခု အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ဖို့၊ ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ၏ သာရေးနာရေး လူမှုရေးများ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့၊ ယခင့်ယခင် မရရှိခဲ့သည့် ကောင်းကျိုးများကို ယခုလို ရရှိလာဖို့ ဆရာဒကာ ညီညွတ်စွာဖြင့် မည်၍မည်မျှ အချိန်ယူကာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြရကြောင်း စိတ်ပန်းလူပန်း စီစဉ်ခဲ့ရသည့် အလှူတစ်ခု၏ အောင်မြင်မှုကို ယခုလို တွေ့ရပြန်သည့်အခါ ပင်းပန်းခဲ့ရသည့် အကျိုးရလာဘ်ကို ကျေနပ်မိခဲ့ကြောင်း၊ စိတ္တသုခကျောင်းနှင့် စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများသည် နောင်လည်းပဲ ယခုလိုပင် တစ်စုတစည်းတည်း စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူပေါင်းပါဝင်ကာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မကြာခင် အမိမြေကို ပြန်ကြရမည့်သူများ ရှိသကဲ့သို့ အမိမြေမှ လာကြမည့်သူများလည်း ရှိနေမည် ဖြစ်သဖြင့် အစဉ်အဆက် တွဲလက်ဆက်ကာ ရှေ့သို့ချီကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့် မိန်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော် မိန့်တော်မူလိုက်မှပင် မကြာမီ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရမည့် ကျောင်းအကျိုးဆောင် ဒကာတစ်ယောက်မှာ ပို၍ပင် ခံစားမိပြီး လက်ရှိကျောင်းအပေါ်တွင် ယခုလို အကျိုးရှိအောင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရပြီး အောင်မြင်မှုရနေသည့် မိမိ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လည်သတိရကာ သူလည်းပဲ မျက်ရည်လည်နေခဲ့သည်ကို အားလုံးက သိရှိခံစားခဲ့ကြ ရပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီး သာဓုအနုမောဒနာ ပြုကြသည့်အခါ အမျှဝေရင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့် သာဓုသံများကား ခွန်အားအပြည့်၊ ပီတိအပြည့်ဖြင့် ကျောင်းတော်တစ်ခုလုံးကို ဟိန်းထွက်ကာ ဘဝဂ်သို့ပင် ညံသွားသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ဆရာတော်ဘေးတွင် ရှိနေခဲ့သည့် ကပ္ပိယကျွန်တော်အပါအဝင် အားလုံးက တစ်ပြေးညီတည်း ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ ကိုရီးယား+မြန်မာ အလှူဒါနများသည် အလွန်ပင် ထူးခြားကာ အောင်မြင်ခဲ့သည့် ဆရာဒကာတို့၏ အောင်ပွဲသစ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ထိုအလှူဒါနကို အကြောင်းပြု၍ ကျခဲ့ကြရသည့် သူတို့သူတို့၏ မျက်ရည်စများသည်လည်း ဝမ်းသာလွန်း၍ ကျခဲ့ကြသည့် မျက်ရည်များ ဖြစ်နေခဲ့ကြသည်ကို ကျွန်တော်အပါအဝင် အားလုံးက တစ်ထပ်တည်း သိရှိခံစားခဲ့ရသည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတော့ကြောင်း…
Posted by cittasukha at 9:05 PM0comments
စုစည်းထားမှု = အထွေထွေ
၁၇-၇-၂၀၁၁(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် စိတ္တသုခမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဒေဂူး၊တောင်ကိုရီးယား)၌ ကျင်းပသော တတိယအကြိမ် မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်ပွဲတွင် အရပ်ရပ်အလှူရှင်များစာရင်း......
၁။ခမည်းတော် ဦးတင်မောင် + မယ်တော် ဒေါ်ခင်ခင်ထွေးအားအမှူးထား၍ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တ......၃၅၀၀၀
-----------------------------ဆရာတော်(၂-ပါး) န၀ကမ္မ အတွက်.....၂၀၀၀၀၀
၄။မမိုးမိုးဦး နှင့်သူငယ်ချင်းများ (ဂယောင်ဘုတ် တက္ကသိုလ်....၅၀၀၀၀
၈။ကိုလင်းထိန်ဝင်း + မမေထက်ထက်လွင်.........................၇၀၀၀၀
၉။ကိုကျော်ဇေယျာတင့် + မအေးအေးဝင့်ကျော်...................၇၀၀၀၀
၁၀။ကိုမင်းနိုင် + မအေးယုနွယ်........................................၅၀၀၀၀
၁၆။ကိုခိုင် ၊ ကိုဝင်းစိန်.....................................................၃၅၀၀၀
၃. ကိုမျိုးညွန့်သိန်း + မသဇင်ငြိမ်း
၇. ကိုသက်နိုင် + မသင်းသင်းဋ္ဌေး
၈. ကိုနေမျိုးအောင်စိုး + မခင်မျိုးဦး
၂၄။ကိုဋ္ဌေးနိုင်မင်း + မခင်မျိုးအေး.............၃၅၀၀၀
၂၅။ကိုအေးလွင် + မကေသွယ်.................၃၅၀၀၀
၃၃။ကိုစိုးမြင့်အောင် + ဒေါက်တာနီနီမာ......၉၀၀၀၀
၃၄ကိုစိုးမြင့်အောင် ( မနာပဒါယီစာကြည့်တိုက်အတွက် )..၃၀၀၀၀
၃၆။ကိုနေမျိုး ၊ ကိုမင်းလတ်.....................၇၀၀၀၀
၃၈။ကိုဝင်းဇော်ဦး + မနုနုအောင် မိသားစု.....၁၀၀၀၀၀
၉၄။ဂယောင်ဆန် မှ ရွှေညီအကိုများ......၁၆၉၀၀၀၀၀
Posted by cittasukha at 7:08 AM0comments
စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ စုပေါင်း ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
ု သတင်းအပြည့်အစုံကို မကြာမီတင်ပြပေးပါမည်
Posted by cittasukha at 4:11 PM0comments
စုစည်းထားမှု = ၅။ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ, ၇။ သာရေး/ နာရေး / လူမှုရေး
စိတ္တသုခကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား) စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ၊ လစဉ်တရားပွဲ၊ ရွှေမြန်မာတွေ့ဆုံပွဲနှင့် ဒါဆန် ရွှေညီအစ်ကိုများ၏ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးရှိ ရွှေမြန်မာအပေါင်းတို့အား အတူတကွ ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြစေဖို့ ကြွရောက်ကြပါရန် ကျောင်းအကျိုးဆောင်များနှင့် အလှူရှင်များက လေးစားစွာဖြင့် အလေးထားကာ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါသည်။
အလှူနေ့ရက် = ၁၇-၇-၂၀၁၁ (ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၂-ရက်)၊ တနင်္ဂနွေနေ့
ဧည့်ခံကျွေးမွေးချိန် = မနက် (၁၀)နာရီမှ နေ့လယ် (၂)နာရီအထိ
နေရာ= စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဒယ်ဂူးမြို့
အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် = ဒါဆန်စက်မှုဇုံ ရွှေညီအစ်ကိုများ
မှတ်ချက်။ ။ အလှူနေ့တွင် စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများက မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့ရှိ အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာကျောင်း၌ စုပေါင်းပေးပို့လှူဒါန်းထားသည့် ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူ၊ ပညာရေးအလှူနှင့် တစ်နေ့တာ ဆွမ်းအလှူ ကုသိုလ်တော်များကိုလည်း တစ်ပေါင်းတည်း ရေစက်သွန်ချ အမျှအတမ်းပေးဝေမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မပျက်မကွက် ကြွရောက်ကြပါရန် ထပ်မံ၍ အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by cittasukha at 8:27 PM0comments
vodaegu.blogopot.com မှသည် voiceofdaegu.org သို့…
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ၊ အထူးသဖြင့် ဒယ်ဂူးမြို့အပါအဝင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းအနီးဝန်းကျင်ရှိ မြန်မာများ၏ သာရေးနာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် အသိပညာ ဗဟုသုတအရေး စသည့် ကောင်းကျိုးတစ်ခုခုကို ဖြည့်ပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖန်တီးခဲ့သည့် ဒယ်ဂူးအသံ အင်တာနက် စာမျက်နှာတစ်ခုသည် စာဖတ်သူများ၏ အားပေးမှု၊ ဒယ်ဂူးအသံ ဝိုင်းတော်သားများ၏ အားဖြည့်မှု စသည်များကြောင့် ယခုဆိုလျှင် မြန်မာများ၏ အကျိုးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ဒယ်ဂူးအသံ အင်တာနက် စာမျက်နှာကို အစမ်းသဘော စမ်းသပ်ရာမှ အများအတွက် အကျိုးကောင်းများ ဖြစ်စေခဲ့သည်ကို လက်တွေ့မြင်လာရသည့်အခါ ဒယ်ဂူးအသံ ဝိုင်းတော်သားများ၏ စိတ်ထဲတွင် ဤစာမျက်နှာကို တစ်ဆင့်ခံအမည်ဖြင့် အသုံးပြုနေရသည့် အခွဲစာမျက်နှာထက် ကိုယ်ပိုင်အမည်တစ်ခု အနေဖြင့် အသုံးပြုကာ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မြန်မာများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချပြလိုသည့် ဆန္ဒများ ထပ်တူဖြစ်ပေါ်လာကြပါသည်။ ထိုဆန္ဒအတိုင်းလည်း ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတစ်ခု ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးစားလာခဲ့သည်မှာ အချိန်အနည်းငယ် ကတည်းကပင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းဝယ်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများမှာ ကိုယ်ပိုင်ခရက်တစ်ကဒ် အသုံးပြုခွင့် မရှိသည်ကတစ်ကြောင်း၊ ရှိသည့် ကဒ်များဖြင့်လည်း ဝယ်၍အဆင်မပြေသည်က တစ်ကြောင်း စသည်များကြောင့် ကိုယ်ပိုဒ်အမည်ဖြင့် မသုံးနိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ယခုသော် ထိုဆန္ဒများ အလုံးစုံ ပြည့်ဝသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲကို ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပ ဒါယီ)၏ အင်တာနက် ဒိုမိန် (http://www.venvicitta.com/) ကို ဝယ်ယူလှူဒါန်းပေးခဲ့သည့် စေတနာရှင် အလှူရှင် နော်ဝေးနိုင်ငံရောက် ဆရာမ ဒေါ်မြကြေးမုံကပင် ဆရာတော်၏ အကြံပြုချက်အရ ဝယ်ယူလှူဒါန်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆရာမ၏ ကျေးဇူးကြောင့်ပင် ယခုဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ ဒယ်ဂူးအသံလေးသည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးဖြင့် တင့်တင့်တယ်တယ်ဖြစ်ကာ မြန်မာများ၏ အကျိုးတစ်ခုခုကို ဆထက်ပို၍ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေတော့မည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
သို့အတွက်ကြောင့်ပင် http://www.voiceofdaegu.org/ ကို ဝယ်ယူပံ့ပိုးပေးခဲ့သည် ဆရာမ ဒေါ်မြကြေးမုံအား ကျွန်တော်တို့ ဒယ်ဂူးအသံ ဝိုင်းတော်သားများက အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဒယ်ဂူးအသံမှတစ်ဆင့် ထပ်ဆင့်လောင်းကာ မှတ်တမ်းတင်ရင်း ကောင်းမှုအစုကြောင့် တောင်းသမျှဆုများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ပါစေရန် ဆုမွန်ကောင်းများလည်း တောင်းပေးလိုက်ရပါသည်။
တစ်ဆက်တည်းပင် ကျွန်တော်တို့၏ ဒယ်ဂူးအသံကို အားပေးဖတ်ရှုကြသည့် ကိုရီးယားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အပါအဝင် ပြည်တွင်းပြပရှိ မြန်မာများအား အသိပေးလိုသည်မှာ ယခုအချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်တို့၏ ဒယ်ဂူးအသံသည် http://www.vodaegu.blogopot.com မှ http://www.voiceofdaegu.org အဖြစ် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာဖြင့် ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် http://www.voiceofdaegu.org သို့သာ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးတင်ပြရင်း http://www.vodaegu.blogopot.com မှ http://www.voiceofdaegu.org/ သို့ပြောင်းသွားခဲ့သည့် ဒယ်ဂူးအသံ၏ ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာ အသစ်အား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
စုစည်းထားမှု = ၈။ ဟိုဟိုဒီဒီ သတင်းများ
စိတ္တသုခ၏ ကိုရီးယား + မြန်မာ စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ သတင်း
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား)၏ ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ လာမည့် ၁၇-၇-၂၀၁၁ (ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၂ရက်)နေ့တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ စိတ္တသုခ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ဒေသရှိ၊ ဂရိမုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်လည်း စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အလှူတော်အဖြစ် ၁၅-၇-၂၀၁၁ (ဝါဆိုလပြည့်)နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
စိတ္တသုခ၏ ယခုနှစ် ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် (၂)နေရာ ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှန်းဝင့်နွယ်က “ကျွန်တော်တို့ ကိုရီးယားရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ ဘာသာ၊ သာသနာအကျိုး၊ လူမှုအကျိုးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ချင်တာရယ်၊ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ အကျိုးတစ်ခုခု ဖြစ်ထွန်းစေချင်တာရယ်၊ စိတ္တသုခ ကျောင်းဒကာဒကာမများရဲ့ အလှူများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရော၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ လှူဒါန်းပြီးသား ဖြစ်စေချင်တာရယ် စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့် ဒီနှစ်ဝါဆိုသင်္ကန်း အလှူကို (၂)နေရာမှာ လှူဒါန်းကြဖို့ အခုလို အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေ များနေပေမယ့် အဓိကလိုအပ်တဲ့ နေရာကို လှူကြမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆရာတော်အပါအဝင် လူကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကြတဲ့အခါ ဂရိမုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့မှာရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို လှူဒါန်းဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေပုံမြို့မှာရှိတဲ့ အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ရဟန်းသံဃာ အပါး (၂၀)နဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ အယောက် (၄၀)လောက်ကို ဝါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ အလှူတွေလှူဒါန်းဖို့ အပါအဝင် တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းဖို့လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွတ်ထားကြောင်း၊ မြန်မာပြည်မှာက ဝါဆိုလပြည့်နေမှာ ပြုလုပ်ပြီး ကိုရီးယားမှာကတော့ တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်အောင် ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၂)ရက်နေ့မှာ လုပ်မှာဖြစ်ပြီး ကိုရီးယား+မြန်မာ အလှူနှစ်ခုကို အများပေါင်းစုလို့ တစ်ပေါင်းတည်း ရေစက်ချ အမျှဝေမှာ ဖြစ်ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ဒယ်ဂူးအသံအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် ၁၇-၇-၂၀၁၁ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲတွင် ဒါဆန်စက်မှုဇုန်ရှိ မြန်မာရွှေညီအစ်ကိုများကလည်း အဆိုပါအလှူပွဲသို့ ကြွရောက်လာသည့် သံဃာတော်များနှင့် ဧည့်ပရိတ်သတ် အပေါင်းတို့အား အထူးစပါယ်ရှယ် မြန်မာအစားအစာများဖြင့် လှူဒါန်းကျွေးမွေး ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ အနေဖြင့် မည်သူမဆို ကြွရောက်ချီးမြှောက်ကာ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုပေးကြဖို့ ဒယ်ဂူးအသံမှတစ်ဆင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးရှိ ကိုရီးယားရောက် ရွှေမြန်မာများ အနေဖြင့်လည်း ၁၇-၇-၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် စိတ္တသုခ၏ ကိုရီးယား+မြန်မာ စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲသို့ အတူတကွ ကြွရောက်၍ ကုသိုလ်ယူကြပါရန် ကျောင်းအကျိုးဆောင်များနှင့် အလှူရှင်များကိုယ်စား ဒယ်ဂူးအသံ ဝိုင်းတော်သားများမှ ထပ်မံ၍ အသိပေးဖိတ်ကြားလိုက်ရပါသည်။
Posted by cittasukha at 8:13 PM0comments
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဒယ်ဂူး) စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အစီအစဉ်
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော စိတ္တသုခမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဒေဂူး၊တောင်ကိုရီးယား)၏ ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲကို ယခင်နှစ်များနှင့်မတူ ယခုနှစ်တွင် နှစ်နေရာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျောင်းတော်ကြီး၏ ဒကာ၊ဒကာမများ သဒ္ဓ္ဓါတရား ထက်သန်စွာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ရေး အတွက် သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အစီအစဉ်ကို တင်ပြပါသည်။
(၁) ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစင်္ကြာနေ့(၁၅-၇-၂၀၁၁ သောကြာနေ့)တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ဒေသရှိ မြေပုံမြို့ အောင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်တွင် သံဃာတော် အပါး(၂၀) အား ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူခြင်း၊နဝကမ္မ ဝတ္တုငွေ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် အဆိုပါကျောင်းတိုက်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ဆယ်တန်း ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အယောက်(၄၀)တို့အတွက် ပညာဒါနအဖြစ် ပညာရေးအထောက်အပံ့ငွေ လှူဒါန်းခြင်း။
(၂)ဝါဆိုလဆုတ်(၂)ရက်(၁၇-၇-၂၀၁၁ တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒေဂူးမြို့ စိတ္တသုခ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ခြင်း။ဒါဆန်းစက်မှုဇုံ ညီအကိုများမှ မြန်မာထမင်းဟင်းများဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။
သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းလိုသူများ၊ပညာဒါန အလှူပေးလှူလိုသူများ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲနှင့် ဆက်သွယ်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Posted by cittasukha at 5:54 AM0comments
ဆရာချစ်ဦးညို ၏ စာပေဟောပြောပွဲ
မြောက်ဥက္ကလာပ (ဈ) ရပ်ကွက် စာပေဟောပြောပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညို၏ ပြောကြားချက်။
နန်နေမန်း ဘလော့မှ ယူပါတယ်...။
Chit Oo Nyo by Niknayman
Posted by cittasukha at 4:58 AM0comments
စုစည်းထားမှု = ၆။ အထွေထွေဗဟုသုတများ
လစဉ်ဟောကြား မြတ်တရား (၅)
ဘုန်းဘုန်းတို့ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရဲ့ တစ်လတစ်ကြိမ် တရားပွဲနဲ့ ရွှေမြန်မာတွေ့ဆုံပွဲကို ဒီလမှာလည်း ထုံးစံအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခြေအနေရ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ထက် တစ်ပတ်စောပြီး ၁၉-၆-၂၀၁၁၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဖခင်ကြီး ဦးတင်ဝင်းကို ရည်စူးပြီး သားဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော်အောင်တင်ဝင်းက ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ သံဃာတော်နဲ့ ဧည့်ပရိတ်သတ်အပေါင်းကို ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့များနဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ အထူးစပါယ်ရှယ် မြန်မာထမင်းဟင်းများနဲ့ လှူဒါန်းကျွေးမွေး ဧည့်ခံပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုကလည်း ပူတဲ့အချိန်ကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလာနေတာဆိုတော့ အပူထဲက ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ကျောင်းရိပ်ကန်ရိပ် ဓမ္မရိပ်နဲ့ အေးမြစေခဲ့သလို အရသာရှိရှိ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကလည်း စားသုံးသူတွေကို တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ နွဲစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါနရဲ့ပီတိ၊ ဓမ္မရဲ့ ပီတိတွေနဲ့ အလှူရှင်များနဲ့ စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများဟာ မိမိတို့နားရမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ကို ကုသိုလ်တွေနဲ့ အဆုံးသတ်စေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ တစ်လတစ်ကြိမ် တရားပွဲဆိုပေမယ့် ဖခင်ကြီးကို ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းတဲ့ ဒါနရှင်များကလည်း ပါနေတဲ့အတွက် အားလုံးမှတ်သားစေနိုင်မယ့် တရားတစ်ပုဒ်ကို ရွေးထုတ်ကာ “မျှော်လင့်ချက်ထား မိဘများ”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လစဉ်ဟောကြား မြတ်တရားအဖြစ် ဟောကြားချီးမြှင့် ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတရားခေါင်းစဉ်လေးကို ပေးရတာက တရားနာပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ မိဘဖြစ်ပြီးသူတွေ၊ ဖြစ်ခဲ့သူတွေပါနေသလို ဖြစ်မယ့်သူတွေ ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာ ရှိသင့်တဲ့ ဝတ္တရားလေးတွေ ဖြည့်ပေးစေချင်တဲ့ အရာလေးတွေကို သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့နဲ့ ဖြည့်နိုင်သလောက် ဖြည့်ပေးကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘာပဲပြောပြော၊ ဘယ်လိုပုံစံပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ မိဘဟာ မိဘပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် မိဘတွေကြားမှာ မဆိုစလောက်လေးတွေက မိဘဝတ္တရားတွေ ပျက်ကွက်မှု ရှိနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုလူ့လောကကို ရောက်စေခဲ့တာ တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုပဲ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးတရားက ဆပ်မကုန်နိုင်အောင် ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို အကုန်ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ပေမယ့် မိဘတွေ မျှော်လင့်တတ်တဲ့ မျှော်လင့်ချင်လေးတွေတော့ တတ်နိုင်သမျှ ပြုစုဖြည့်ဆည်းပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြည့်ဆည်းပေးတာ၊ ကျေးဇူးသိတတ်ပေးတာဟာ မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့လည်း ညီညွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလသုတ်တော်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်က “မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနံ ပုတ္တဒါရဿ သင်္ဂဟော” စသဖြင့် ဟောကြားတော်မူထားတာ ရှိပါတယ်။ မိဘတို့ကို ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းဟာ မင်္ဂလာဖြစ်ပြီး သားမယားကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဟာလည်း မင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ မိဘအပေါ် တာဝန်ကျေတဲ့သူ၊ သားမယားအပေါ် တာဝန်ကျေတဲ့သူဟာ မင်္ဂလာရှိတဲ့သူပဲလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီနေရာမှာ ပြောလိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ထား မိဘများဆိုတာ မိဘတွေ မျှော်လင့်တတ်ကြတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးများအကြောင်း ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘဆိုတဲ့ သဘောက သားသမီးတွေအပေါ်မှာ မိမိတို့အတွက် အရမ်းကြီးမျှော်လင့်တဲ့ သဘောမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်မိဘမဆို သားသမီးတွေအနေနဲ့ ဒို့အပေါ်မှာ ဒီလိုလေးဆိုရင် ကောင်းမှာပဲ၊ ဒီလိုလေး ဖြည့်ပေးရင် ကောင်းမှာပဲ စတဲ့တောင့်တမှု သဘောသက်သက် လေးလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတောင့်တချက်လေးတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ မဖြည့်ပေးလို့၊ မလုပ်ပေးလို့ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာပျက်တာ၊ စေတနာ ပျက်တာဆိုတာ မိဘတွေမှာ မရှိပါဘူး။ မျှော်လင့်တယ်၊ တောင့်တတယ်ဆိုတာကတော့ စိတ်ရှိတဲ့သူတိုင်း၊ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောမျိုးလေးကို ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာ မိဘတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်များ အနေနဲ့ ဖွင့်ဆိုရှင်းပြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာပေအဖွင့်တွေအရ မိဘများရဲ့ သားသမီးတွေ အပေါ်မှာ မျှော်လင့်တောင့်တတတ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက် (၅)မျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီငါးမျိုးက
၁။ ငါတို့ရဲ့ သားသမီးတွေဟာ ငါ့တို့အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်လာတဲ့အခါ တစ်ခါပြန်ပြီး ပြုစုလုပ်ကျွေးကြလိမ့်မယ်
၂။ ငါတို့ရဲ့ အမှုကိစ္စတွေကို ပြုလုပ်ပေးကြလိမ့်မယ်
၃။ ငါတို့ရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံကြလိမ့်မယ်
၄။ ငါတို့ရဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ထိန်းကြလိမ့်မယ်
၅။ ငါတို့သေပြီးနောက်မှာ ငါ့တို့အတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကာ အမျှအတမ်း ပေးဝေပေးကြလိမ့်မယ် ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီတောင့်တချက် (၅)မျိုးဟာ မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တချက်လို့ ဆိုပေမယ့် သားသမီးတွေဘက်က ကြည့်ရင် သားသမီးဝတ္တရား (၅)မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရဖူးပြီးသားဖြစ်တဲ့ သားသမီး ဝတ္တရားငါးပါး ဆောင်ပုဒ်လေးကို ပြန်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင် “ကျွေးမွေးမပြတ်၊ ဆောင်ရွတ်စီမံ၊ မွေခံထိုက်စေ၊ လှူမျှဝေ၍၊ စောင့်လေမျိုးနွယ်၊ ဝတ်ငါးသွယ်၊ ကျင့်ဖွယ်သားတို့သာ” ဆိုတဲ့ သားသမီးဝတ္တရား ငါးချက်ကို သတိပြုမိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ သားသမီးဝတ္တရား ငါးပါးကို ပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူ၊ သားသမီး ဝတ္တရားနဲ့အညီ နေထိုင်နေတဲ့သူဆိုရင် မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်း ဖြည့်ပေးနေတဲ့သူဆိုတာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေတောင့်တတဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တချက်ကို ဖြည့်ပေးနေသူဆိုရင် သားသမီးဝတ္တရား ကျေပွန်နေပြီး မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်နေသူတွေဆိုလည်း မမှားနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်ချင်သူတွေ၊ မိဘတွေရဲ့ တောင့်တချက်ကို ဖြည့်ချင်သူတွေဟာ အထွေအထူး ဟိုဟိုဒီဒီ စဉ်စားစရာမလိုဘဲ သားသမီးဝတ္တရား ငါးပါးကိုသာ ကျေပွန်အောင် ကြိုးစားနေရုံနဲ့ လောကဝတ်တွေကို ကျေပွန်စေကာ ကျေးဇူးတရား ဆပ်နေသူများအဖြစ် ဂုဏ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးသတိပြုရမှာက သားသမီးဝတ္တရာငါးပါး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မိဘတို့မျှော်လင့်ချက် ငါးပါးထဲက မိဘတွေရဲ့ အမွေဆက်ခံဖို့နဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ထိန်းဖို့ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမွေဆိုတဲ့နေရာမှာ ကောင်းမွေတွေကို ဆက်ခံဖို့နဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ထိန်းတယ်ဆိုရာမှာ အိမ်ထောင်သားမွေးပြီး သားသမီးတွေ အများကြီးနဲ့ လူသားမျိုးဆက် တိုးပွားစေဖို့ထက် သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်၊ ကောင်းမြတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ သူတော်သူမြတ် အမျိုးဇာတ်တွေဖြစ်အောင် စောင့်ထိန်းဖို့ကို ဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သတိပြုကြဖို့ လိုပါတယ်။ မိဘတွေ အစဉ်အဆက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုအမွေတွေ၊ မိဘတွေ အစဉ်အဆက် ထိန်းခဲ့တဲ့ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာကောင်းတဲ့ အမျိုးဇာတ်တွေကို ဆက်ခံထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုမျိုး တွေကိုသာ မွေခံထိုက်စေ၊ စောင့်လေမျိုးနွယ်လို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအချက်တွေကို အထူးသတိပြု ဆက်ခံထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီမျှော်လင့်ချက်ငါးမျိုး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် သားသမီးတွေရဲ့ ဝတ္တရာငါးမျိုးထဲမှာ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ မိဘတွေကို ရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ် အမျှအတမ်း ပေးဝေပေးတဲ့ အချက်ဟာ ဒီနေရာ သားသမီးတွေ အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် စွမ်းနိုင်သမျှ မကြာခဏလည်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သေပြီးနောက် ဘဝအသစ်ကို ရောက်သွားတဲ့ သူတွေအတွက် တကယ်လို့များ အစွဲတစ်ခုခုကြောင့် မကောင်းတဲ့ ပြိတ္တာဘုံမျိုးကို ရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင် ဒီဘုံဘဝကလွတ်အောင်၊ မလွတ်တောင်မှ အဲဒီဘုံဘဝမှာ ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး မျှော်လင့်နိုင်တာက မသေသေးဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီး အမျှအတမ်းပေးဝေးပေးတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ခုပဲ သူတို့မှာ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့လို ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီးကို ရည်စူးပြီးကုသိုလ်လုပ် အမျှအတမ်းပေးဝေ ပေးတဲ့အလုပ်မျိုးဟာ သားသမီးတွေအတွက် မိဘကျေးဇူးကို နောက်ဆုံးအဓိကအကျဆုံး အချက်အဖြစ် ဆပ်တာလို့ ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စကားစပ်လို့ မိဘကျေးဇူးဆပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ငါးမျိုး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် သားသမီးဝတ္တရား ငါးမျိုးကို ကျေပွန်အောင်ကြိုးစား နေထိုင်နေတဲ့သူတွေဟာ မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်နေတာလို့ ဆိုပေမယ့် အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို အပြည့်အဝ ဆပ်ပေးတာလို့တော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ အမြတ်ဆုံး ကျေးဇူးဆပ်တာလို့လည်း မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ မိဘကျေးဇူးအကျေ ဆပ်ဖို့ကတော့ ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ အနှစ်သာရ ဓမ္မနဲ့ကျေအောင် ဆပ်မှပဲ အကျေဆပ်နိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က “သားသမီး ဖြစ်သောသူသည် အသက်တစ်ရာတန်း၌ဖြစ်၍ အသက်တစ်ရာပတ်လုံး ပခုံးတစ်ဖက်ဖြင့် အမိကိုဆောင်ကာ ပခုံးတစ်ဖက်ဖြင့် အဖကိုဆောင်၍ ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်း၊ အမိအဖတို့အား အနံ့အသက်ကင်းအောင် အမွေးအကြိုင်လိမ်းပေးခြင်း၊ အညောင်းအညာပြေအောင် နှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ ရေပူရေအေးဖြင့် ရေချိုးပေးခြင်း၊ ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုပေးခြင်း ယုတ်စွအဆုံး ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုပင် မိမိ၏ ပခုံးထက်၌ စွန့်ကုန်စေခြင်း၊ များစွာသော ရတနာရှိသော မဟာပထ၀ီမြေကြီးကို အုပ်ချုပ်စိုးပိုင်သော မင်းစည်းစိမ်း၌ မိဘတို့ကို ခံစားတည်နေစေခြင်း စသည့် ကျေးဇူးဆပ်နည်းတို့ဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ပါသော်လည်း မိဘတို့အား ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ စင်စစ် သဒ္ဓါတရား မရှိသော အမိအဖတို့ကို သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံခြင်းငှါ ဆောက်တည်စေခြင်း၊ သက်ဝင်စေခြင်း၊ တည်စေခြင်း သီလမရှိသော အမိအဖတို့ကို သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းငှါ ဆောက်တည်စေခြင်း၊ သက်ဝင်စေခြင်း၊ တည်စေခြင်း၊ ၀န်တိုခြင်း မစ္ဆရိယ ရှိကုန်သော အမိအဖတို့ကို စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်းငှါ ဆောက်တည်စေခြင်း၊ သက်ဝင်စေခြင်း၊ တည်စေခြင်း၊ ပညာမဲ့သော အမိအဖတို့ကို ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းငှါ ဆောက်တည်စေခြင်း၊ သက်ဝင်စေခြင်း၊ တည်စေခြင်း စသည့် ကျေးဇူးဆပ်နည်းတို့ဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းသည်သာ မိဘတို့အား ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း” (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ ဒုကနိပါတ်၊ သမစိတ္တ၀ဂ်၊ ) မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဒါက ဘုရားပေးတော်မူတဲ့ မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ ဒီဟောကြားချက်ကို မှီငြမ်းပြီး မန်လည်ဆရာတော်ကြီးက မဃဒေဝလင်္ကာသစ်ကျမ်းမှာ “မိကိုလက်ျာ၊ ဖမှာလက်ဝဲ၊ အမြဲထမ်းလျက်၊ ပခုံးထက်တွင်၊ သို့ပင်နိစ္စ၊ လုပ်ကျွေးကြလည်း၊ ရှေးကပြုဖူး၊ မွေးကျေးဇူးကို၊ အထူးမြဲခိုင်၊ မဆပ်နိုင်တည်း။ မဖြူနှလုံး၊ မသုံးသီလ၊ ဒါနမပွား၊ မသွားကျောင်းကန်၊ ဟုတ်လှမှန်သား၊ မိဘအားကို၊ လှူဒါနနှင့် သီလဥပုသ်၊ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး၊ စောင့်သုံးစေမှ၊ ဟောဖော်ပြ၍၊ ဓမ္မဖြင့်သာ၊ ဆပ်နိုင်ရာ၏”လို့ အခုလို သီးကုံးဆပ်ဆိုထားတာကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် မှတ်သားရပါတယ်။
ဆိုတော့ကား ဒီလိုတရားနဲ့ အကျေမဆပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ကျေးဇူးဆပ်နည်းတွေဟာ မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်ရာမရောက်ဘူးလား ဆိုတော့ အဲဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တချက်လေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းရင်း သားသမီးဝတ္တရားကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ သားသမီးတွေဟာ လောကကြောင်းအရ၊ လောကဝတ်အရ မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မိဘတွေကို အရိယာ အဆင့်လောက်အထိ ရောက်အောင် ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး၊ အကျေဆုံး ကျေးဇူးဆပ်နည်းလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီလောက်အထိ မလုပ်နိုင်သေးရင်လည်း အခုလို သားသမီးဝတ္တရားကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ် ဆိုရင်ကိုပဲ ဒါဟာ အလွန်ပြည့်စုံတဲ့ အထူးကျေးဇူးဆပ်နည်းလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာအဓိက ပြောချင်တာက မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ ဘာလုပ်ပေးပါ၊ ဘယ်လိုဆောင်ရွတ်ပေးပါ စသဖြင့် အတင်းအဓမ္မ လိုချင်တောင့်တမှုနဲ့ နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြီး သားသမီးတွေကို ဖိအားပေးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မရှိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ဒီလိုလေးဆိုရင် ကောင်းမှာပဲ၊ ဒါလေးလုပ်ပေးရင် ကောင်းမှာပဲ စတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မဟုတ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ရှိတတ်ရာမှာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တချက် ငါးမျိုးလည်းပဲ ရှိနိုင်တဲ့အတွက် ဒီလို ကျေးဇူးများတဲ့ မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တချက်များကို သားသမီးများ ပြုကျင့်ရမယ့် သားသမီးဝတ္တရား ငါးပါးကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရင်း ဖြည့်ဆည်းပေးကြဖို့ ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဗုဒ္ဓအလိုကျ တရားနဲ့ကျေအောင် ဆပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုရပေမယ့် အဲဒီလိုမလုပ်နိုင်သေးရင်လည်း ဒီလိုလောကဝတ်ကို ကျေပွန်စေခြင်းနဲ့လည်း မိဘကျေးဇူးကို အထိုက်အလျောက် ဆပ်နေနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိဘဝမှာပဲ သားသမီးဝတ္တရားကို ကျေပွန်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လစဉ်ဟောကြား ပေးလာခဲ့တဲ့ တရားပွဲများမှာ ဒီနေ့လုပ်တဲ့ တရားပွဲရဲ့ အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ မိဘနဲ့သားသမီးကြား အပြန်အလှန် ကျေးဇူးတရားများ ရှိကြရာမှာ မိဘကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦးလို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း အလွန်ကြီးမားလှတဲ့ မိဘကျေးဇူးကို အကျေမဆပ်နိုင်ပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်တောင့်တချက်တွေကို သားသမီးဝတ်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွတ်ပြီး စွမ်းနိုင်သမျှ ဆပ်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း ဒီတစ်လရဲ့ လစဉ်ဟောကြား မြတ်တရား တစ်ပုဒ်အဖြစ် ထုတ်နှုတ် ဟောကြားလိုက်ရပါတယ်။
အားလုံး မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီ ပြည့်မှီနိုင်ကြပါစေ…
Posted by cittasukha at 6:33 PM0comments
စုစည်းထားမှု = လစဉ်ဟောကြား မြတ်တရား
လစဉ် တတိယပတ် တရားပွဲ၏ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဒေဂူး၊ကိုရီးယား)တွင် လစဉ် တတိယပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တရားပွဲ၊အလှူပွဲ နှင့် ရွှေမြန်မာ တွေ့ဆုံပွဲကို ကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။
ကုသိုလ်တရားများ တိုးပွားစေရန်၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများရှိကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အခါအားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော စာသင်ကျောင်းများ၊ရပ်ရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများစသည့် အဖက်ဖက်မှ လိုအပ်နေသည်အများကိုလည်း စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆရာတော်မှ ဦးဆောင် ကာ လှူဒါန်းလျှက်ရှိနေပါသည်။
လာမည့်ဇူလိုင်လ တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါသော (စာသင်တိုက်/ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး တွဲလျှက် ရှိသော)ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ် လှူခြင်း၊ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်း၊စာသင်သား သံဃာတော်များ(သို့မဟုတ်)ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေး ကျောင်းမှ ကျောင်းသား/သူ များအတွက် လိုအပ်သည်များ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အတူတကွ ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြရန် နှင့် ဝါဆိုပွဲပါဝင်ဆင်နွဲကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
သင်္ကန်းတစ်စုံ ဝမ်သုံးသောင်းခွဲ နှင့် စာသင်သားများအတွက် ဝမ် ငါးထောင် ဖြင့် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
၄-၂၀၁၁/၅-၂၀၁၁ နှင့် ၆-၂၀၁၁ အလှူရှင်များ .....
စိတ္တသုခမြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဒေဂူး-ကိုရီးယား) သို့ လစဉ်အလှူရှင်များမှ စေတနာ သဒ္ဓါတရား ထက် သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းလျှက်ရှိကြပါသည်။
အောက်ဖေါ်ပြပါအလှူရှင်များ၏ အလှူကို ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်-
(၁)ဒေါက်တာ ဒေါ်နီနီ.........(၄-၅-၆ လ အင်တာနက်/ရေ/မီး အလှူ) ဝမ် သုံးသိန်း
(၄)ကိုပြည့်ဖြိုးမောင် (လစဉ်အလှူ)............................................ဝမ် တစ်သောင်း
(၅)၁၉-၆-၂၀၁၁ တရားပွဲလာ အလှူရှင်များမှ ..............................ဝမ် တစ်သိန်းရှစ်သောင်း
(၆)ယုံအမ်း ကိုအောင်ကိုနှင့်သူငယ်ချင်းများ.................................ဝမ် နှစ်သိန်း
(၇) ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီး ဦးတင်ဝင်းအား ရည်စူး၍ သား ကိုဇော်ဇော်အောင်တင်ဝင်းမှ ဆရာတော် နဝကမ္မ အလှူ၊သင်္ကန်းအလှူနှင့် တရားပွဲလာ မိတ်ဆွေများအား ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ပြုသွားပါသည်။
Posted by cittasukha at 5:56 AM0comments
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် ရွှေမြန်မာများ လစဉ်ကုသိုလ်တရား တိုးပွားစေရန်နှင့် အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုဖြစ်ထွန်းကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကာ လစဉ် လတစ်လ၏ နောက်ဆုံးပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တစ်လတစ်ကြိမ် တရားပွဲ များနှင့် ရွှေမြန်မာတွေ့ဆုံပွဲများ တွင် ၁၉-၆-၂၀၁၁ ရက်၊တနင်္ဂနွေနေ့ တရားပွဲကို (၃-၅-၂၀၁၁)ရက်နေ့ က ကွယ်လွန်သွားသော ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဦးတင်ဝင်း အားရည်စူး၍ သားဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော်အောင်တင်ဝင်းမှ မြတ်စွာဘုရားအားအမှူးထားပြီး ဆရာတော်အား သင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊လှူဖွယ်ဝတ္ထု ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအား ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း အလှူဖြင့် ကုသိုလ်ပြု မည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေး ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်= June 19 –6– 2011 (တနင်္ဂနွေနေ့)
Posted by cittasukha at 5:01 AM0comments
၂၀၁၁ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ(ကိုရီးယား) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
ကိုရီးယား နိုင်ငံရောက် မြန်မာစာပေချစ်မြတ်နိုးသော လူငယ်များ စုပေါင်းကျင်းပသည့် ၂၀၁၁ ကိုရီးယား စာပေပွဲ ကျင်းပပုံ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ (၅-၆-၂၀၁၁၊ဘူချွန်းမြို့၊ကိုရီးယားနိုင်ငံ)
အလုပ်မအား၊အင်တာနက် အဆင်မပြေ နောက်ကျနေတာတွေ ခွင့်လွတ်ပါ....(ကိုဝင်းလတ်)
Posted by cittasukha at 6:54 AM0comments
မနာပ ဒါယီ စာကြည့်တိုက်အတွက် လှူဒါန်းထားသော အလှူရှင်များ
“မနာပ ဒါယီ” စာကြည့်တိုက်အတွက် လက်ရှိလှူဒါန်း ထားပြီးဖြစ်သည့် အလှူရှင်များ စာရင်းကို အများကြည်ဖြူ မုဒိတာ ယူနိုင်စေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ (စာကြည့်တိုက်အကြောင်းကို ဒီမှာ ပြန်ဖတ်နိုင်ပါသည်)
၉။ ဒေါက်တာ နီနီမာ = ၅၀၀၀၀ (ဝမ် ငါးသောင်း)
၁၀။ ကိုခင်မောင်ချင်း၊ ကိုဟန်ထွန်းမောင် = ၅၀၀၀၀ (ဝမ်ငါးသောင်း)
*** အလှူရှင်စာရင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။
Posted by cittasukha at 4:14 AM0comments
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း သမိုင်းအကျဉ်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ကိုရီးယားရောက် မြန်မာလူမျိုး များ၏ မတည်လှူဒါန်းမှုဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် ကျောင်းတော်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေ လိုအပ်ချက်အရ ကိုရီးယားနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမြို့များကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကျောင်းတော်တစ်ခု အဖြစ် ယခုလက်ရှိ ပဓာန နာယကကျောင်းထိုင် ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တ၏ ဦးဆောင်မှု၊ ကျောင်းအကျိုးဆောင်များ၏ လှုပ်ရှားမှု၊ စေတနာရှင် ကျောင်းအလှူရှင်များ၏ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုဖြင့် အကောင်အထည် ပေါ်ခဲ့သည့် ဤကျောင်းတော်သည် ယခုဆိုလျှင် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ကိုရီးယား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ နားခိုရာ ကျောင်းတော်သာအဖြစ် ကောင်းမွန်စွာ တည်တံ့နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကျောင်းတော် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၏ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းကြည့်လျှင် ဂုဏ်ယူစရာအချက်များ၊ ပီတိပွားစရာ အချက်များကို အများအပြားတွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က လက်ရှိကျောင်းထိုင် ဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တသည် ကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းတက်နေရင်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမြို့များဖြစ်သည့် ဒယ်ဂူး၊ ဂင်မဲ၊ ဘူဆန်၊ အူလ်ဆန် စသည့် မြို့များရှိ မြန်မာများ၏ ပင့်ဖိတ်ချက်အရ အခါအားလျော်စွာ တရားဓမ္မများ ကြွရောက်ဟောကြားနေခဲ့ရာမှ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများ အတွက် အောက်ပိုင်းမြို့များတွင် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းလောက် ရှိသင့်သည်ဟု အကြံပြုကာ မြန်မာများ၏ ဆန္ဒကို မေးမြန်းရာတွင် အားလုံးက အားတက်သရောဖြင့် ထိုလိုအပ်ချက်ကို အများပေါင်းပြီး အကောင်အထည် ဖော်ကြမည့်အကြောင်း လျှောက်ထားကြသည်။
ထိုသို့ ပြင်းပြသော ဆန္ဒနှင့်အတူ ၃၁-၈-၂၀၀၈ ရက်နေ့တွင်၊ ဒယ်ဂူးမြို့၊ Golden Friends မြန်မာဆိုင်၌ မြို့နယ်အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဦးဆောင်ဒကာများဖြင့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး ကျောင်း ဖြစ်မြောက်ရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကို ယာယီဖွဲ့စည်းကာ အလှူငွေများ စုဆောင်းခြင်းကို စတင်လှုပ်ရှား ခဲ့ကြသည်။ ထက်သန်သည့် ဆန္ဒ၊ ဝိရီယ၊ တူညီသည့် သဒ္ဓါတရားများကြောင့် အချိန် (၂)လခန့် အတွင်းမှာပင် လိုအပ်သည့် အလှူငွေများကို စုဆောင်းရရှိခဲ့ကြပြီး ၂၄-၁၀-၂၀၀၈ရက်နေ့တွင် ဒယ်ဂူးမြို့ရှိ အိမ်တစ်အိမ်၏ အောက်ထပ်တစ်ခြမ်းကို စပေါ်တင်လစဉ်အိမ်လခဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အိမ်ကြီးမှာ အနည်းငယ်ကျယ်ဝန်းသဖြင့် အကန့်ခွဲကာ အိမ်ရှင်မှ ငှါးရမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၏ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအဖြစ် သင့်လျော်သည့် အနေအထားရှိသဖြင့် ထိုအောက်ထပ်တစ်ခြမ်းကိုပင် ငှါးရမ်းကာ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဖြစ် စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဖြစ် အငှါးစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ၂၆-၁-၂၀၀၉ရက်နေ့တွင် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်၊ အကျိုးဆောင်များနှင့် အလှူရှင်များ အများပေါင်းစုကာ ကျောင်းတက်ပွဲကို စည်ကားစွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နေ့မှာပင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှေရှည်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကိုလည်း အတည်ပြု ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ဆရာဒကာ ညီညွတ်စွာ ရှိစေရေး၊ ကျောင်းတော်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့စေရေးတို့အတွက် ဆရာတော်နှင့် ကျောင်းအကျိုးဆောင်များသည် ပွင့်လင်းစွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြပြီး တာဝန်ကိုယ်စီ ကျေပွန်စေမည်ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုကာ စိတ္တသုခ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို အောင်မြင်စွာ အစပြုခဲ့ကြသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ကျောင်းတော်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့ရေး၊ မြန်မာများ၏ သာရေးနာရေး လူမှုရေးများတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေး၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ဝင်စားသည့် ကိုရီးယားလူမျိုးများအား ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများဖြင့် နှလုံးလှစေရေး၊ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် စွမ်းနိုင်သမျှ အားဖြည့်ပေးရေးစသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆရာဒကာ ပူပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြရာ မူလက အိမ်အောက်ထပ် တစ်ခြမ်းကိုသာ ငှါးရမ်းထားရာမှ ကျောင်းဖြစ်ပေါ်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာပင် အောက်ထပ် တစ်ထပ်လုံးကို အပြည့်အဝငှါးရမ်း အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းစပေါ်ငွေနှင့် ရံပုံငွေများကိုလည်း အထိုက်အလျောက် ပြည့်စုံစွာ စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ကျောင်းအကျိုးဆောင်များနှင့် ကျောင်းဒကာဒကာမများ၏ အထောက်အပံ့များဖြင့် ယခုဆိုလျင် ဆရာတော် အနေဖြင့်လည်း မြန်မာများ၏ သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးများကို ဦးဆောင်မှု ပေးနေသကဲ့သို့ ကိုရီးယားများအားလည်း အပတ်စဉ် တရားဟောခြင်း၊ တရားပြခြင်း၊ စာပေသင်ကြား ပို့ချပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးနေနိုင်ဖြစ်ကာ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ထောက်ပံ့ကူညီ ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်နေပြီ ဖြစ်သည့်အပြင် စာအုပ်စာပေများ ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်း၊ အွန်းလိုင်းမှလည်း ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမများ ရေးသားဖြန့်ဝေခြင်း စသည့်သာသနာပြု လုပ်ငန်းများကိုပါ မပင်မပန်း ချမ်းချမ်းသာသာ လုပ်နေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အကျိုးဆောင် အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကာ လစဉ်တရားပွဲများ၊ ရွှေမြန်မာ စုံညီပွဲများကို အရှိန်အဟုန်မပြတ် ကျင်းပပြုလုပ်နေကြသကဲ့သို့ ကျောင်းတည်ထောင်ခြင်း နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်ကဲ့သို့သော နေ့ထူးနေ့ရက် အခါများတွင်လည်း အလှူငွေများ စုဆောင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ကလေးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဌာနများ၊ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု စက်ပစ္စည်းအလှူများ၊ အခါအားလျော်စွာ ပေါ်ပေါက်လာသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ရောက် ဒုက္ခသည်များအား ပံ့ပိုးလှူဒါန်းမှုများ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ကြွရောက်လာသည့် နာမည်ကြီး ဆရာ တော်ကြီးများနှင့် စာရေးဆရာများအား ပင့်ဖိတ်၍ ဘာသာရေးပွဲများ၊ ပညာရေးပွဲများ၊ ချစ်ကြည်ရေးပွဲများ စသည်တို့ကိုလည်း ဆရာဒကာ ညီညွတ်စွာဖြင့် အတ္တပရ လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းလာကြသည့် စိတ္တသုခ၏ ဆရာနှင့် ဒကာတို့သည် ဘာသာရေးအပြင် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဆရာတော်၏ ဦးဆောင်မှု၊ ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၂၇-၂-၂၀၁၁ရက်နေ့တွင် “စိတ္တသုခ လူမှုကူညီရေး အသင်း”ကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းကား ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများ၏ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များ၊ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လိုအပ်သည့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်ပံ့ပိုးလာနိုင် ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို အကြောင်းပြု၍ ဆရာတော်၏ ဦးဆောင်မှု၊ ကျောင်းအကျိုးဆောင် အဖွဲ့၏ အကျိုးဆောင်မှု၊ လူမှုကူညီရေး အသင်း၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများသည် အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသီးအပွင့်များ ဖြစ်ထွန်းနေလျက်ရှိသည့်အပြင် ရှေဆက်၍လည်း ထိုထက်ပိုပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးကို ကြိုးစားဆောင်ရွတ် သွားကြမည့်အကြောင်း အဓိဋ္ဌာန်လောင်းလျက် ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သမိုင်းတစ်ခေတ် ဆိုက်ထူဖြစ်သည့် စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ ကုသိုလ်တိုးပွား ရက်စွဲများ
- ၂၆-၁-၂၀၀၉၊ ကျောင်းတက်ပွဲနှင့် ကျောင်းဖွင့်ပွဲအလှူတော်
- ၁၂-၄-၂၀၀၉၊ ပထမအကြိမ် နှစ်သစ်အကြို အလှူပွဲနှင့် ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ်ပွဲ
- ၅-၇-၂၀၀၉၊ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ
- ၁၄-၂-၂၀၁၀၊ ကျောင်းတည်ထောင်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သုခရိပ်မြုံဂေဟာရှိ HIV/AIDS ကလေးများအတွက် အလှူငွေ ဆယ်သိန်းကျော် ပေးပို့လှူဒါန်း
- ၁၁-၄-၂၀၁၀၊ ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနှစ်သစ်အကြို အလှူပွဲနှင့် ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ်ပွဲ
- ၂၀-၇-၂၀၁၀၊ ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်စက်အလှူတော် မြန်မာငွေဆယ်သိန်း
- ၂၅-၇-၂၀၁၀၊ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
- ၂၁-၉-၂၀၁၀၊ ချူဆော့ပိတ်ရက် စုပေါင်း ဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲ
- ၃၁-၁၀-၂၀၁၀၊ ပထမအကြိမ် စုပေါင်း ကထိန်အလှူပွဲ
- ၁၄-၁၁-၂၀၁၀၊ စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ မြန်မာပြည်တွင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ကလေးများအတွက် အဝတ်အထည်များ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်း အလှူတော်
- ၆-၂-၂၀၁၁၊ စိတ္တသုခ ကျောင်းတည်ထောင်းခြင်း (၂)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ အထူးတရားပွဲ အလှူတော်
- ၂၇-၂-၂၀၁၁၊ စိတ္တသုခ လူမှုကူညီရေး အသင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ် အလှူတော်နှင့် ကင်ဆာရောဂါ ဝေဒနာရှင် ကိုရီးယားရောက် ကိုအောင်နိုင်ဝင်းအတွက် အလှူငွေ (၅)သိန်းလှူဒါန်း
- ၈-၄-၂၀၁၁ နေ့တွင် ဆုံးပါးသွားသော ကိုမိုးကောင်းအတွက် စုပေါင်းအလှူ
- ၁၅-၄-၂၀၁၁ နေ့တွင် ဆုံးပါးသွားသော ကိုလှမျိုးဝင်းအတွက် စုပေါင်းအလှူ
- ၁၇-၄-၂၀၁၁၊ တတိယအကြိမ် မြန်မာနှစ်ဦးအလှူတော်နှင့် ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ်ပွဲ
- ၂၉-၅-၂၀၁၁၊ ဆရာဖေမြင့်၊ ဆရာအော်ပီကျယ်တို့အား စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ ဆရာကန်တော့ပွဲနှင့် ဒယ်ဂူးစာပေဆွေးနွေးပွဲ
- ၁၇-၇-၂၀၁၁၊ တတိယအကြိမ် စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပွဲနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့ရှိ အောင်မင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်အလှူ၊ ပညာရေးအလှူ၊ ဆွမ်းအလှူနှင့်၊ ကျောင်းအလှူတော်များ စုပေါင်းရေစက်ချခြင်း (ထိုအလှူသို့ ကိုရီးယားဝမ် သိန်း ၂၀ကျော် (မြန်မာငွေ ၁၅သိန်းတိတိ)ကို ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့သည်)
Posted by cittasukha at 3:44 AM0comments
စိတ္တသုခ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တတိယ အကြိမ် နှစ်ပတ်လည...
မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော် (ကိုရီးယား) မြန်မာပု...
ဓမ္မဒူတ (ကိုရီးယား) မြေနေရာဝယ်ယူရေးအလှူတော်ငွေ အတွက...
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် စုပေါင်း မဟာ ဘုံကထိန် အလှူတော် ...
စိတ္တသုခကျောင်း စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလှူ ကျင်းပပြုလု...
လစဉ်တရားပွဲနှင့် ရွှေညီအစ်ကိုများတွေ့ဆုံပွဲ ဖိတ်ကြာ...
စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ၏ ဆောရပ်ဆန် (설악산) ခရီး မှတ်တမ်...
စိတ္တသုခ အဖွဲ့သားများ အများပေါင်းစု၍ ဂန်ဝမ်ဒို၊ ဆော...
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီး...
ကိုရွှန်းဝင့်နွယ်၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးလှူဒါ...
မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးအလွန် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်...
စိတ္တသုခ ဒကာဒကာမများ၏ စုပေါင်း ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှ...
စိတ္တသုခကျောင်း (ဒယ်ဂူး၊ ကိုရီးယား) စုပေါင်းဝါဆိုသက...
စိတ္တသုခ၏ ကိုရီးယား + မြန်မာ စုပေါင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက...
စိတ္တသုခ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(ဒယ်ဂူး) စုပေါင်...
၂၀၁၁ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ(ကိုရီးယား) မှတ်တမ်းဓါတ်ပ...
မနာပ ဒါယီ စာကြည့်တိုက်အတွက် လှူဒါန်းထားသော အလှူရှင...